That's so good, right?: April 2011
Tour Guide (Part One)
ကျွန်တော့် ကို နိုင်ငံခြားသားတော်တော် များများက လင်း (LIN) လို့ပဲခေါ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော့် နာမည်အရင်းက လင်းသွေးသစ် ပါ။ နာမည်ကို ကြားဖူးသလိုလို ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဖိုးဒင်တို့ရွာကို ၃ လကြာ စာသွားသင်ပေးခဲ့တဲ့ `လင်းသွေးသစ်´ ပါ။ ကျွန်တော် ဒီနှစ်ဆို အသက် ၂၈ နှစ်ပါ။ ကျွန်တော် ဟာ နာမည်ရ တိုးဂိုက် တယောက်မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံခြားမှာ ဘွဲ့ယူ ပြန်လာပြီး ကျွန်တော် သူ နဲ့ ခင်မင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူ ဆိုတာ ကျွန်တော့်ထက် အသက် ၇ နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ သက်ဦးမောင် ပါ။ အသက်က ကျွန်တော့်ထက် ကြီးပေမယ့် သူ့ကို ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ခေါ်တဲ့ အတိုင်း မောင် လို့ တလုံးတည်း ခေါ်ခိုင်းပါတယ်။ ဒီနာမည်လေးကို သူ ကြိုက်ပုံရတယ်။ မောင် က ဂေး မဟုတ်သလို Bisexual လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ မောင် က ပွင့်လင်းတယ်။ (ဒါကြောင့် အပုန်းလည်း မဟုတ်ပါဘူး…xxx မဆိုင်သလိုပဲxxx) သဘောထားပြည့်ဝတယ်။
ကျွန်တော့်ကို တကယ့် ညီအရင်း တယောက်လို ဆုံးမတယ်။ ဂိုက် လုပ်သက်ကြာ နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် တခြား သူတွေလို ဆရာစား မချန် ဘဲ အကုန် သင်ပေးတယ်။ မောင် ပြောနေကျ စကားတခွန်းလိုပဲ… `ဒီလောက ဆိုတာ ပင်လယ်ရေလိုပဲ...တယောက်တည်း သောက် လို့ လည်း ကုန်မှမကုန်တာ…´ ။ မောင် ပြောတာလားဟုတ်သလိုလိုနဲ့ မဟုတ်ဘူး။ ပင်လယ်ရေကို ဘယ်သူကသောက်မှာလဲ။ ဒီလောက် တောင် ငန်ကျွတ်နေတာ။ နောက်တခုက တကယ်သောက်ရင်လည်း ကုန်မှာမဟုတ်ပါဘူး ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကမ္ဘာကြီးက ပူနွေး လာလို့ ရေခဲတောင်တွေ အရေပျော်နေတာ ပင်လယ်ရေတွေ ဒီ့ထက်တောင် မြင့်တက်လာနိုင်သေးတယ်။ ထားပါတော့ ပင်လယ်ရေ။ ဒီနေ့မနက်ပဲ မောင် ဖုန်းဆက်လာတယ်။ လာမယ့် SUNDAY မှာ ဧည့်သည်နှစ်ယောက်ကို ကျွန်တော် ဂိုက်လုပ်ပေးရ မယ်တဲ့။ ထူးဆန်းတာက အရင်လို အဖွဲ့တွေနဲ့ မလာဘဲ နှစ်ယောက်တည်းကို ဂိုက် တယောက်သီးသန့်ခေါ်တယ်။
မောင် က ဖုန်းထဲမှာဆိုရင် စကားကို လိုရင်းတိုရှင်းပဲပြောတယ်။ အလုပ်ကိစ္စတောင် ကြာကြာမပြောဘူး။ ကံကောင်းတာက မောင်နဲ့ ကျွန်တော့်အိမ်က ဘတ်စ်ကား ၁မှတ်တိုင်စာလောက်ပဲဝေးတယ်။ မောင် ပြောစရာရှိရင် ညကြီးမိုးချုပ်လည်း ဖုန်းဆက်ပြီး ကျွန်တော့်ကို ထွက်လာခိုင်းတယ်။ မိုးလင်းပေါက်ဖွင့်တဲ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးမှာ ထိုင်ပြီး စကားတွေအကြာကြီးပြောပြီးမှ ပြန်ကြတယ်။ တခါတလေ မိုးလင်းတဲ့ အထိပဲ။ မောင်က သောကြာသားလို့ မပြောရဘူး။ စကား အရမ်းပြောနိုင်တယ်။ သူ စာအုပ်ထဲမှာ တွေ့တဲ့ စကားလုံး အသစ် အစမ်းတွေ၊ သူ ဂိုက်လုပ်တဲ့အခါ ဘိုမ တွေရဲ့ လုံးပြီး အိနေတဲ့ နို့ကြီးတွေကို သူဘယ်လောက် ထိ ကိုင်ချင်တဲ့အကြောင်း။ စုံနေတာပါပဲ။ ဒီညလည်း မောင်နဲ့ တွေ့ဖို့ရှိတယ်။ လက်ဖက်ရည် ဆိုင်ကို မောင် ထက်စောစော ကျွန်တော်ရောက်နေတတ်တယ်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ရောက်တော့ လူတွေက အပြည့်။ ၉နာရီတောင် ထိုးနေပြီ တချို့ ကောင်မလေးတွေလည်း ခုထိ မပြန်သေးဘူး။ မီးမလာတဲ့ ရန်ကုန်ရဲ့ ပူအိုက်နေတဲ့ ညတွေမှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေက တခုတည်းသော အပန်းဖြေရာနေရာတစ်ခု။
ဒီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးက လမ်းမကျယ်ကျယ်ကြီးရဲ့ ဒေါင့်နားမှဖွင့်ထားတော့ မိုးချုပ်လေ လေက တဟူးဟူး တိုက်လေ။ ဒီဆိုင်ရဲ့ ထူးခြားတာ တခုက စားပွဲထိုးလေးတွေက ကလေးအလုပ်သမား မဟုတ်ဘဲ ၁၇ …၁၈ အရွယ်ကောင်လေးတွေ။ ဆိုင်ရှင်ကိုမေးတော့ ကလေးအလုပ် သမားတွေကို သူတို့လို လုပ်ငန်းရှင်တွေက အလုပ်ခန့်နေသရွေ့ သူတို့တွေ စာမဖတ်ရတော့ဘဲ အလုပ်သမား တစ်သက် လုံးဖြစ်သွားမယ်တဲ့။ ဆိုင်ရှင်ပြောတာကို ကျွန်တော် ငြင်းချင်ပေမယ့် မငြင်းတော့ဘူး။ သူတို့ရဲ့ အခြေအနေက စာတတ်ရေး မတတ်ရေး က ၀မ်းစာက အရေးကြီးတယ်။ အလုပ်လည်းမရှိ၊ ကျောင်းလည်း မတတ်ရရင် သူတို့ဘ၀က ပိုပြီး လေလွင့်သွားမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင် တယ်။ ဒါပေမယ့် လခနည်းနည်းပဲ ပေးရတဲ့ ကလေးအလုပ်သမားထက် အရွယ်ရောက် လူငယ်တွေကို ဆိုင်ရှင်ကခေါ်ထားတာတော့ ကျွန်တော်လေးစားတယ်။ သူ့ဝင်ငွေ ထက် သူခံယူထားတဲ့ ခံယူချက်ကို သူအကောင်အထည်ဖော်တယ်။ ဆိုင်က ကောင်လေးတွေ သူတို့ဝတ်ထားတဲ့ အစိမ်းရောင် တီရှပ်တွေက သန့်သန့်ရှင်းရှင်း။ ကျွန်တော်လာတိုင်း ပြေးလာတတ်တဲ့ ကောင်လေးက သူ့ထုံးစံအတိုင်း သနပ်ခါးကို တစ်ဖက်တည်း လေးထောင့်ကျကျ ခပ်သွယ်သွယ်လေး လိမ်းထားတယ်။ ကျွန်တော် မေးကြည့်ပါသေးတယ်။ သနပ်ခါးကို တစ်ဖက်တည်း လိမ်းထားတာ တစ်ဖက်သက် အချစ်တဲ့။ သူ့မှာ တစ်ဖက်သက်ချစ်နေတဲ့ သူရှိကြောင်းကို ဖော်ပြထားပုံပဲ။ ဆိုင်ရှင်ခေါ်နေတဲ့အတိုင်း `ငရဲ´ လို့ သူ့ကိုမခေါ်ဘဲ..ကျွန်တော်က `ရဲ´ လို့တလုံးထဲခေါ်တယ်။ ဖိုးဒင် နီးပါမြင့်တဲ့ ရဲ ရဲ့ လက်ဖျံတွေက လူငယ်တယောက်နဲ့မလိုက်အောင် တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်။
`ကိုသွေး….ဒီနေ့.... မောင်လေး မလာသေးဘူးလား….´ မောင်နဲ့လည်း ရင်းနှီးနေပြီဖြစ်တဲ့ ရဲ က မောင့် ကို မောင်လေး လို့ ခေါ်တယ်။ မောင် ရှိနေရင်တော့ မခေါ်ရဲပါဘူး။
` အေး…မိတ်ကပ်လိမ်း နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုးနေရလို့နေမှာပေါ့.´
` ဟား....ကိုသွေး က ရီရတယ်…´ ဟောဗျာ။ ကျွန်တော်က ရီရတယ်တဲ့။ ဆိုင်ရှင်ရှိတဲ့အတွက် ခါတိုင်းလို ကျွန်တော့် ပုခုံးတွေကို အနောက်ကနေလာမနှိပ်ပေးတော့ဘူး။ ရီပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော့်အနားက ထွက်သွားတယ်။ မောင် က ဘောင်းဘီတိုနဲ့ စွပ်ကျယ်လက်ပျက်နဲ့။ ကျွန်တော့်ထက် အသက်ကြီးပေမယ့် ခုလိုယှဉ်လိုက်ရင် မောင် က တကယ့်ကလေးလေး။
` ခုမှရောက်တာ´ မောင် က ကျွဲကော်ကိုင်း (ဘောင်အမည်းနဲ့ လေးထောင့်ကျကျ မျက်မှန်ကိုင်း) တပ်ရင် ပိုကြည့်ကောင်းတယ်။ မျက်မှန်မတပ်ထားရင် မျက်လုံးကြီးက ပြူးနေသလိုပဲ။
` ဒီနေ့ ပိုပူသလိုပဲ…´ နဂိုက မှ ဒူးအပေါ်မှာပဲရှိတဲ့ ဘောင်းဘီတိုကို လေ၀င်အောင် လက်နဲ့ ဟစိဟစိ လုပ်လိုက်တယ်။ မောင့် ရဲ့ မဲကျုပ်ကျုပ် ညီလေးကို တပိုင်းတစ မြင်လိုက်ရတယ်။ မောင် က အခုလို အနေအထိုင်မတတ်ပေမယ့် တခါမှ မောင့် ညီငယ်လေးကို ကောင်းကောင်း မမြင်ဖူးပါဘူး။
` ငါလည်း မီးလာတဲ့နိုင်ငံမှာပြောင်းနေမှထင်တယ်…မီးကလည်းမလာ…ရာသီဥတုက ပူအိုက်…မီးစက်သံက တဒုန်းဒုန်း… Shit! ပဲ´ မောင် ပြောမှမဟုတ်ပါ။ ရန်ကုန်ရဲ့ မီးမလာတဲ့ည တွေက တကယ့်ကို သေလောက်အောင် ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်သူတွေရဲ့ မီးစက်ကထွက်တဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် တွေကလည်း ကြောက်ခမန်းလိလိ။
` ဘိုမ တယောက်ကို အပိုင်ကိုင်ပြီး လိုက်သွားလေဗျာ…´ ဘိုမ ဆိုတာနဲ့ မောင့် မျက်လုံးတွေ က လင်းလာသလိုပဲ။ ဘေးနားက စားပွဲထိုးလေးကို မောင် သောက်နေကျ ကော်ဖီမှုန့်ရယ် သကြားရယ် သံပုရာတစ်စိပ်ညှစ်ထားတဲ့ မည်းတူးနေတဲ့ ကော်ဖီကို မှာလိုက်တယ်။
` my pleasure…ဒါနဲ့ ကျွန်တော် ဘယ်နေ့ဟိုနှစ်ယောက်ကို သွားကြိုပေးရမလဲ´
မောင် က ဘာမှမဆိုင်ဘဲ သူ့ညီငယ်ကို တချက်ခပ်ဖော့ဖော့ ညစ်လိုက်သည်။
` လာမယ့် သောကြာ…ဒီမှာ…သူတို့နာမည်တွေ….´ မောင်က သူ့ဘောင်းဘီတိုထဲက စာရွက် အပိုင်းလေးတခုကို ထုတ်ပေးတယ်။ ကျွန်တော်ယူကြည့်လိုက်တော့ Harry Louis နဲ့ Christian Alexander ။ မောင်က
` သူတို့က ဓာတ်ပုံဆရာတွေ…ပုဂံ ကို အဓိကသွားမှာ…နောက်…ပြန်ခါနီး ကမ်းခြေတခုခု သွားမယ်တဲ့…´
` အတော်ပဲဗျာ… ကျွန်တော် ပုဂံကို အရမ်းသွားချင်နေတာ…´
` မင်းမို့ သွားချင်တယ်…ခုဆို ဟိုမှာ ပူခြစ်တောက်နေမှာ… လူ…အငွေ့မပျံသွားရင် ကံကောင်း´ စားပွဲထိုးလေး လာချပေးသွားတဲ့ ကော်ဖီထဲကို မောင်က သံပုရာသီးစိပ်လေး ညစ်ထည့်လိုက်တယ်။
` ညတွေဆိုအေးပါတယ်ဗျ´ အေးတယ်လို့ ပြောနေတုန်း လေပွေရိုင်းလေးသေးသေး လေးတခုက ကျွန်တော်တို့ တ၀ိုင်းကျော်က စည်းကမ်းမရှိ ပစ်ထားတဲ့ တစ်ရှုးတွေကို ဝှေ့ပြီးသယ်သွားတယ်။
` ဒါနဲ့ မင်း…ပုဂံရာဇ၀င်တွေ ပြန်ကျက်ထားအုံး…´
` မောင် ကလည်း…သူတို့က ဓာတ်ပုံလာရိုက်မှာ သပ်သပ်ပဲကို´
` အော်…မေးရင် ဖြေလို့ရအောင်ပါကွ… ငါတို့ ဂိုက်တွေက ပုဂံက ကလေးလေးတွေလို တောင် တတွတ်တွတ် မပြောနိုင်ရင် သိက္ခာကျတာပေါ့ကွ..´ ဟုတ်လည်းဟုတ်သည်။ ဒီလို ကျောင်းမတတ်ပဲ တတွတ်တွတ် မတတ်တခေါက် တတ်တခေါက် လိုက်ရှင်းပြပြီး မုန့်ဖိုးတောင်းတဲ့ ကလေးတွေကော ကလေး အလုပ်သမားထဲမှာ မပါဘူးလား။
` ကျွန်တော် ကျက်ထားပါတယ်ဗျ…ခုနှစ်တွေနည်းနည်းပါးပါး ပြန်နွေးရုံပဲ… နဂိုက ပုဂံ ကို စိတ်ဝင်စားတော့ ကျွန်တော့်အတွက်.. ပိစိညှောင့်တောက်ကိတ် လေးပါ။ ´apiece of cake ကို ကျွန်တော်တို့ တွေ ဒီလိုပဲ မြန်မာမှုပြုပြီး ပြောတတ်တယ်။ မောင် က စကားကသာ ဒီမှာပြောနေတာ မောင့် မျက်လုံးတွေက ထိုင်ခုံက ထသွားတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ အနောက်ပိုင်း အလှ ဆီ။
` မောင်… မျက်လုံးကို အနားမပေးသေးဘူးလား…´
` ဟေ…´ ခုမှ ပြန်သတိရလာတဲ့ လူမမာ မျက်လုံးမျိုးနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုကြည့်တယ်။ ဘာလို့ ယောကျာ်း(စစ်စစ်)တွေ က ရင်သားကြီးကြီး တင်ကြီးကြီး မိန်းမတွေမြင်ရင် စားမယ် ၀ါးမယ် မျက်လုံးတွေနဲ့ မျက်လုံးကို အစာကျွေးရတာလဲ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က ဂေး ဖြစ်နေပေမယ့် ဗလတောင့်တောင့် ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့် ယောကျာ်းတိုင်းကိုတော့ စားမယ် ၀ါးမယ် မျက်လုံးနဲ့ မကြည့်ဖြစ်ပါဘူး။ (ခိုးခိုးပြီးတော့ပဲကြည့်တာပါ…)။
` ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့….ဘိုမ တယောက်ကို ဆွဲထားလိုက်ပါလို့..´ မောင်က သူ့ရှေ့က ကော်ဖီကို တချက် ပါရုံလေး သောက်လိုက်တယ်။
` ဟိုဟာမတွေက ငါတို့ အေးရှားသားတွေ သွားလုပ်ရင်…သွားကြားထိုးတံ ထိုးသလိုပဲ..အားယားယား…ယားတယ်..ယားတယ် လို့အော်မှပေါ့ကွ´ အားရပါးရ ရီချင်ပေမယ့် ဘေးချင်းကပ် ၀ိုင်းက လင်မယားက လှမ်းကြည့်တယ်။
` မောင် ကလည်း သွားကြားထိုးတံနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး… ပညာက အဓိကပါ…´
` သိပါတယ်ကွ… သဘောပြောပြတာ..´ မောင်က ဒီလောက်ထိ ထန် ပေမယ့် ရည်းစားခုထိ မရှိသေးဘူး။
` ဟုတ်ပါတယ် လိင်ဂုရုကြီးရာ…´ မောင်နဲ့ ကျွန်တော် ဒီလိုပဲ ညတွေကို ပေါက်တတ်ကရတွေ ပြောပြီး အချိန်ဖြုန်းတတ်ပါတယ်။ ရေနွေး အိုးကုန်သွားလို့ စားပွဲထိုးလေးကို ခေါ်မယ်လုပ်တုန်း ရဲ က ချက်ချင်းပဲ ရေနွေးအိုးလာလဲပေးတယ်။ ဒီဆိုင်ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ အထူးသဖြင့် သွားတတ်လေးပေါ်အောင် ပြုံးပြတဲ့ သနပ်ခါးတဖက်တည်း လိမ်းထားတဲ့ ရဲ က ပိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ ရဲ ပြောတဲ့ တဖက်သက် အချစ်ဆိုတာ….။
` ဒါနဲ့… ဟို ဘိုနှစ်ယောက်က ရန်ကုန်မှာ မအိပ်ဘူး…။ တစ်ခါတည်း ပုဂံအရင်လစ်မှာကွ..´
` လောလှချည်လား..လက်မှတ်က ဘယ်လိုဝယ်မလဲ´ မောင် က မထီတထီ ပြုံးပြတယ်။ မင်း ဒါတောင် မသိဘူးလား လို့ ဆိုနေသလိုမျိုး။
` ကားစင်းလုံးငှားပြီးသား…ဟိုကတည်းက အားလုံး အဆင်သင့်လုပ်ပြီးသား…´ ကျွန်တော်သိ သလောက် တော်ရုံတန်ရုံ ဘိုတွေက ပိုက်ဆံကို ချွေနိုင်သမျှချွေကြတယ်။
` လန်း လှချည်လား´
` ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲဝင်မလို့ လာရိုက်တာဆိုလားပဲ…´ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်လိုက်တော့ သုံးလေးဝိုင်း လောက်သာကျန်တော့သည်။ ကောင်မလေး တွေမရှိတော့။ ကျွန်တော် အလုပ်ချိန်က လွဲရင် နာရီမပတ်တတ်တော့ ဘယ်နှစ်နာရီထိုးမှန်းမသိ။
` ဒါဆို ကျွန်တော်က သူတို့ကို ကြိုပြီးတာနဲ့ ပုဂံကို လိုက်သွားရမှာပေါ့´ မေးစရာမလိုတဲ့ မေးခွန်းကို မောင်ကလည်း ဖြေစရာလိုတယ်လို့ ထင်ပုံမပေါ်။
` ခရီးကရက်ရှည်မှာဆိုတော့ မင်း အ၀တ်ထုပ်ကြီး လေးပြီပေါ့´ ကျွန်တော်က အ၀တ်အစားတွေထက် နေရောင်ကာ ခရင်တွေကိုသာ များများစားစား သယ်သွားတတ်တယ်။ အ၀တ်အစားကလည်း ပုဆိုးနဲ့ ကော်လံကတုံးဆိုတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပါ။ ကျွန်တော်လည်း မောင် ပြောတဲ့ စကားကို ပြန်မဖြေတော့ဘူး။
` မောင် ကော… အစီအစဉ်က..´ မောင်က ခွက်ထဲက အကျန်ကို ကော်ဖီ အနည်တွေ ပါမှကြောက်လို့ ဖြေးဖြေးလေး မော့သောက်တယ်။
` လောလောဆယ်တော့ ရှိသေးဘူး… ဒီနှစ်ယောက်က မိန်းမတွေဆို မင်းကိုတောင် မပေးဘူး´
` သိပါတယ်ဗျာ… ယောကျာ်း ဆိုလို့ မောင် ပေါင်းလို့ရတာ ကျွန်တော် တယောက်တည်းရှိသာပဲဟာ…´ မောင် က နှုတ်ခမ်းကိုစေ့ပြီး ခေါင်းကို တညိတ်ညိတ်။ မောင် ဒီလောက် အနားမှာ အမြဲတမ်းရှိနေပေမယ့် မောင့် ကို ကျွန်တော် မချစ်မိဘူး။ တချို့တွေ ပြောသလို ဂေး ဆိုတာ ယောကျာ်းမြင်ရင် မနေနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ ဂေး တွေထဲမှာ ကျွန်တော်မပါဘူး။ လူတွေက ခက်တယ်။ ဂေး ဆိုတာနဲ့ သိက္ခာကင်းမဲ့ပြီး သောက်ရှက်မရှိတဲ့ သတ္တ၀ါလို့ထင်နေကြတာ။ ရွံစရာ သတ္တ၀ါ လို့ထင်နေကြတာ။ ဂေး ဆိုတာလည်း အသည်းနှလုံးနဲ့ပါ။
ကျွန်တော် မလုပ်ချင်ဆုံးအလုပ်ထဲမှာ လူတစ်ယောက်ကို စောင့် နေရတာကိုပါ။ လေယာဉ်ကွင်းကို မိနစ် ၄၀ လောက် သာမောင်းရပေမယ့် ကျွန်တော့်ကို ခုထိ လာမကြိုသေး။ နောက် ၅ မိနစ် ဆိုရောက်မယ်လို့ပြောပေမယ့် ၁၅ မိနစ်ရှိနေပြီ။ ကျွန်တော့် ဒေါသတွေကို မြိုသိပ်ရင်း လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပြန်စစ်နေလိုက်တယ်။ တိုးဂိုက် အလုပ်ကို ကျွန်တော်အရင်က ထင်ခဲ့တာ သက်သာလိမ့်မယ်။ ဘာသာလေးပြန်ပေးရုံပဲ။ တကယ်တမ်း တိုးဂိုက် ဆိုတဲ့အလုပ်က တကယ့်ကို ပင်ပန်းပါတယ်။ သူတို့သွားရာ တကောက်ကောက်လိုက်ရရုံတင်မက ပါးစပ်ကလည်း တတွတ်တွတ်နဲ့ မေးသမျှကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဖြေပေးရ တယ်။ ကျွန်တော့်ကို လာမကြိုခင် ကျွန်တော့်အကျင့်အတိုင်း ပစ္စည်းတွေကို ပြန်စစ်နေလိုက်သည်။
အမေက ကျွန်တော် အခု အသက်အရွယ်အထိ အခုလို စိတ်ပူပေးတတ်တယ်။ ခုလည်း ၀ရံတာက နေ ကျွန်တော့်အစား ထွက်ကြည့် နေတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုလာကြိုမယ့်သူဟာ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါမှန်းမသိပေမယ့် အမေ့ကို ဟုတ်တယ် လို့ပြောပြီး ကျွန်တော် အိမ်အောက် ဆင်းလိုက်တယ်။ ဒီနွေပူပူက ရေချိုးပြီးစ လူတယောက်ကို နောက်တခါ ရေထပ်ချိုးချင်လောက်ရအောင် ပူတယ်။ အမေ ပြောတာ မှန် တယ်။ ကျွန်တော့် ဆီကို ကျွန်တော့်ထက် အရပ်မတိမ်းမရိမ်း လူတယောက်ရောက်လာတယ်။
` လင်း ဆိုတာလား မသိဘူး´
` ဟုတ်ပါတယ်…´ အသက်ကတော့ ၄၀ ၀န်းကျင်လောက်ရှိပုံရတယ်။ သူဝတ်ထားတဲ့ ရှပ်အင်္ကျီရဲ့ ကြယ်သီးတွေက ပြုတ်ထွက်လုနီးပါး တင်းကျပ်နေတယ်။ ကာယာဗလမောင်တွေ အသက်ကြီးလို့ ထပ်ပြီးမလေ့ကျင့်တော့တဲ့အခါ အဆီတွေတက်လာတဲ့ရင်အုပ်ကားကားသူ့တွင်ရှိနေတယ် ။ အသားက ညိုတာထက် မည်းသည် ဟုပြောလို့ရတယ်။ မျက်ခုံးထူထူရယ် မေးရိုးကားကားရယ်က တခါမြင်ရုံနဲ့မှတ်မိစေတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ရီပြတဲ့အခါ ကွမ်းတွေစားထားလို့ နီနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေထဲမှာ ၀ါကျင်ကျင် သွားတွေက အစီအရီ။
` ကျွန်တော့်ကို အထုပ်ပေး…´
` ရပါတယ်ကွ…အကို့ကို အားနာစရာမလိုဘူး…´ သူ့ကိုယ်ပေါ်က ချွေးနံ့ခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့ ကွမ်းယာနံ့ တွေက တော်ရုံလူဆိုရင် မူးမေ့သွားစေလောက်တယ်။
` အေး…ကားက ဒီဘက်မှာရပ်ထားတယ်…´ သူ ရှေ့က ထွက်သွားတော့ တင်းကျပ်နေအောင် ၀တ်ထားတဲ့ သူ့ပုဆိုးအောက်မှာ တလှုပ်လှုပ် ဖင်လုံးကြီးများက အတွင်းခံဘောင်းဘီ ရဲ့ အထိန်းအကွပ်မဲ့မရှိဘဲ ပရမ်းပတာ လှုပ်နေတယ်။ ကျွန်တော် GYM မှာသွားကစားတုန်းက ဆရာတွေအမြဲပြောတယ်။ နောက် မအားလို့ မကစားဖြစ်ရင် အစားလျော့စားရမယ်တဲ့။ မဟုတ်ရင် အဆီတွေ တက်လာလိမ့်မယ်။ ဒီလူ့ကြည့်ရတာလည်း ကစားလိုက် နားလိုက် ပုံစံမျိုး။ ကျွန်တော် ကို ရှေ့ခန်းမှာထိုင်ခိုင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကားစီးရင် နောက်ခန်းမှာထိုင်ရတာ ကိုပိုကြိုက်တယ်။ သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ကျွန်တော် ရှေ့ခန်းမှာထိုင်လိုက်တယ်။
`ညီလေး နာမည်က… လင်း တလုံးတည်းလား´ ကျွန်တော့်ကို ညီလေး လို့ခေါ်တာထက် ညီ လို့တလုံးထဲ ခေါ်တာ ပိုပြီးနွေးထွေးတယ်လို့ခံစားရတယ်။
` မဟုတ်ပါဘူး…လင်းသွေးသစ် ပါ… ဘိုတွေတော်တော်များများ ခေါ်လို့လွယ်အောင် လင်း ဆိုပြီးပဲ ပေးထားတာပါ´
` အကို့ ကို ကျွန်တော် ဘယ်လို ခေါ်ရမလဲဗျ´
` ငါ့ကို သားကြီး လို့ပဲခေါ်´ သားကြီး ဆိုလို့ ရုပ်ရှင်မင်းသားဒွေးကို သတိရသွားတယ်။ သူ့အသက်အရွယ်ကို ကျွန်တော်က သားကြီး လို့ခေါ်ရတာ တမျိုးကြီးပဲ။
` ဟုတ်…ကိုသားကြီး…´ လေးစားသောအနေနဲ့ ကို တပ်ခေါ်လိုက်တယ်။
` သားကြီးပဲခေါ်စမ်းပါကွ…. ကိုသားကြီး ဆိုလို့ငါ့ကိုခေါ်တာ ငါ့မိန်းမပဲရှိတယ်..´ သူမိန်းမရှိတဲ့ ဆိုတာ တခါတည်း ကြေငြာထားတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ဘာလို့များ လူပျိုလူလွတ်ထက် အိမ်ထောင်ရှိတဲ့ ယောကျာ်းတွေကို ပိုပြီး နှစ်သက်နေရတာလဲ။ သားကြီးကိုယ်ပေါ်ကို ဖြတ်တိုက်လာတဲ့ လေထဲမှာ ကွမ်းနံ့က ကျွန်တော့်ကို မူးယစ်စေတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ မရိုးမရွဖြစ်လာတယ်။ သားကြီးရဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကြားက ညီငယ် ကိုမသိမသာ လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ သားကြီး ၀တ်ထားတဲ့ ပုဆိုးက ကွင်းကျဉ်းပုံရတယ်။ ပုဆိုးကို ပေါင်တ၀က်လောက်ထိရောက်အောင် တင်ထားတယ်။ ပေါင်ကြားထဲ မှာ သားကြီးရဲ့ ညီငယ်က သိသိသာသာဖောင်းကားနေတယ်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီမ၀တ်ထားလို့လားမသိ လိင်တံတခုလုံး ပုဆိုးနဲ့ကပ်နေတာကို အထင်းသားမြင်နေရတယ်။ ပုဆိုးနဲ့လုံးနေလို့လား…ဒါမှမဟုတ် သားကြီးရဲ့ လီးကြီးကပဲ ဦးတုတ်ကြီး အတိုင်း ခပ်တုတ်တုတ်ရှိတာလား။ ဝေခွဲလို့မရအောင် ကျွန်တော့် ရင်တွေ တုန်ရီနေတယ်။ ရန်ကုန်နွေရဲ့ အပူရှိန်က ကားထဲမှာ ထိုင်နေတဲ့လူအဖို့ oven ထဲထည့်ထားသလိုပဲ။ Air Con မဖွင့်ဘူးလား လို့မေးချင်ပေမယ့် ကျွန်တော် မမေးတော့ဘူး။ ကားတံခါးက မှန်ကိုဖွင့်ထားလို့တော်သေတယ်။
`ဒီမှာတောင် ဒီလောက်ပူနေရင် ပုဂံ ဆိုရင်တော့ ပိုဆိုးပြီ ထင်တယ်´ ကိုသားကြီးက
`အင်း ´ လို့တလုံးတည်းပြန်ဖြေပြီး ကားဒတ်ခ်ဘုတ် ထဲက ကွမ်းဘူးလေးကို လက်တဖက်တည်း နဲ့လှမ်းယူလိုက်တယ်။ ကွမ်းဘူး လေးကို ပေါင်နှစ်လုံကြားမှာ ညှပ်လိုက်ပြီး အဖုံးကို ဖွင့်လိုက်တယ်။ဖြစ်ချင်တော့ ကွမ်းဘူး လေးက ပေါင်ကြားကနေ အောက်ကို လျောကျသွားတယ်။
` စောက်ရေးထဲ…´ ကိုသားကြီးရဲ့ စောက် ဆိုတဲ့ အသံက တော်တော့်ကို ကျယ်တယ်။ သူ့လက်ထဲက ဘူးခွံကိုလည်း လက်ထဲက နေ အောက်ကိုပစ်ချလိုက်တယ်။ တော်တော့်ကို စိတ်မရှည်တဲ့ လူပါလား။
` အောက်က ပြုတ်ကျသေးတယ်… ဒီတဗူးတောင် မနည်းဝယ်ထားရတာ´ ကားမောင်းတဲ့ သူတွေ ကွမ်းယာ စားတဲ့သူက ကွမ်းစား။ ဆေးလိပ်သောက်တတ်တဲ့ သူက သောက်ပြီး ကားမောင်းရင်း အိပ်မပျော်အောင် သူတို့ အာရုံတွေကို ခဏတာ ပြောင်းထားတတ်ကြသည်မဟုတ်လား။
` ကျွန်တော် ကောက်ပေးမယ်လေ´
` ရပါတယ် ညီလေးရာ… အကိုက အောက်ကျသွားတဲ့ အစားအသောက်ကို ပြန်ပြီး ကောက် မစားတတ်ဘူး´ လူပုံစံက ညစ်တီးညစ်ပတ်လို့ထင်ရပေမယ့် ဒါကျတော့။ အသန့်ကြိုက်တယ်လို့ ပြောရမလား။ ဇီဇာကြောင်တယ်လို့ပြောရမလား။
` ကွမ်းယာက ဘူးထဲမှာပဲလေဗျာ´ ကျွန်တော့် လေသံက မာသွားတယ်ထင်တယ်။
` အဲလို သဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ညီလေးကို ကောက်ခိုင်းရမှာက…´ ကိုသားကြီးက စကားကို ဆက်မပြောတော့။ ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ ကွမ်းဘူးက ထိုင်ခုံအောက်ဘက်နားမှာ ကပ်နေတယ်။
` ရပါတယ်…ဗျ…ဒီလူနဲ့ဒီလူ…´ ကျွန်တော် ခါးကို အနည်းငယ်သူ့ဖက်ကို ယိမ်းလိုက်ပြီး ကောက်ပေမယ့် မမီဘူး။ စတီယာတိုင်ကို ရှောင်ပြီး သူ့ ပေါင်ကြားထဲကို ကျွန်တော့်မျက်နှာအပ် လုနီးပါး ဖြစ်တဲ့ အထိ ဖြစ်သွားတယ်။ နဂိုက မှ ပုဆိုးကို ပေါင်တ၀က်ထိ တင်ထားတော့ ကျွန်တော့် မျက်လုံးတွေက မကြည့်ဘဲ မနေနိုင်အောင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ မည်းတူးပြီး အမွေးတွေ နဲ့ ဂွေးဥကြီးကိုသာမြင်လိုက်ရတယ်။ ပုဆိုးက ချွေးနဲ့ ကပ်နေပုံရတယ်။
`ရပြီ…အကို´ ကျွန်တော့် အသံတွေတုန်နေမှာသေချာတယ်။ ဖိုးဒင်တို့ရွာကနေ ရန်ကုန်ပြန် ရောက်ကတည်းက တကိုယ်တည်း ဖြေသိမ့်ခဲ့ရတဲ့ နေ့ရက်တွေ မနည်းတော့ဘူး။
` အေး… ငါ့ကို တရာ ယူပေး…´ ခုနက ပဲ မစားဘူး ဆိုတဲ့ လူက။ ကွမ်းဘူးထဲကို ကြည့်လိုက်တော့ ကွမ်း တွေက တခုမှ မရော့။ ကွမ်းတရာကို ယူပြီးပေးလိုက်တော့…
` အာ…´ ဆိုပြီး ပါးစပ်ကို ဟပေးတယ်။ ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲ ပါးစပ်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် ခရီးစဉ်တောင်မစရသေး။ ရင်ဘတ်တွေတုန်ယုံတင်မကဘူး။ ဒူးတွေတောင် ချောင်လာသလိုပဲ။
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေယာဉ်ကွင်းအထဲ ၀င်ဝင်ခြင်း မြင်တွေ့လိုက်ရသည် က များပြား လှတဲ့ လူ တွေ။ ဖြစ်နိုင်ခြေ အရှိဆုံးက စင်္ကာပူလေယာဉ် သို့ မလေး လေယာဉ် အချိန်နှင့် သွားတိုက်တာဖြစ် နိုင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက လူငယ်တွေအားလုံး စလုံး တို့ မလေး တို့ကို အစုလိုက် အပြုံလိုက် သွားနေကြပါလား။
ကျွန်တော့် ဧည့်သည်နှစ်ယောက်က ထိုင်း လေယာဉ်နှင့်ပါလာမည်။ နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ ၁၀ မိနစ်လောက် လိုနေသေးသည်။ ကျွန်တော့် အိတ်ထဲကနေ သူတို့ နှစ်ယောက် နာမည်ပါတဲ့ စာရွက်လေးကို ထုတ်လိုက်တယ်။
` ညီလေး… အကို… သေးသွားပေါက်လိုက်အုံးမယ်…´ ကိုသားကြီးရဲ့ စကားလုံး အသုံးအနှုန်း ကြောင့် ကျွန်တော့်ဘေးနားမှာ ရပ်နေတဲ့ ကောင်မလေးက ကိုသားကြီးကို တချက်ကြည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်နဲ့ သူမ နဲ့ မျက်လုံးချင်းဆုံသွားတယ်။ ကောင်မလေးက အလွန်ဆုံးရှိ အသက် ၂၀ ပေါ့။ အသားအရေက မြို့ပြရဲ့ ကောင်မလေး တယောက်နဲ့ မတူ။ သဘာဝ အတိုင်း ရှည်လျားကော့ဆင်းနေတဲ့ မျက်တောင်က ခပ်သွယ်သွယ် မျက်လုံးကို ပိုပြီး သွယ်သွားစေတယ်။ သွေးနုရောင်သန်း နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေက ဆေးတွေ ထိုးထားတဲ့ ဟောလိဝုဒ် မင်းသမီးတွေ လို မဟုတ်ဘဲ သဘာဝ အတိုင်း ဖောင်းဖောင်းအိအိလေး။ ကျွန်တော့် အကြည့်ကြောင့် ကောင်မလေး မျက်လွာချသွားပြီး မှန်ကနေတဆင့် ဓာတ်လှေကားက နေဆင်းလာမယ့် သူကို လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော် ရင်ခုန်သွားတာလား။ သေချာတာကတော့ ကျွန်တော့် နှလုံးခုန်သံ ပိုမြန်သွားတယ်။ ဂေး တယောက်လို့ လုံးဝ ခံယူထားပေမယ့် အခု လို ကောင်မလေး မျိုးနဲ့တွေ့ရင် ရင်တော့ ခုန်မိသား။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ့ ရင်ခုန်သံ ဟာ မိနစ်ပိုင်းလောက်သာ ကြာတယ်။ ဓာတ်လှေကား ကနေ ဆင်းလာတဲ့ လူတွေကို ကျွန်တော် ခုနက ကောင်မလေး နဲ့ အတူငေးနေမိတယ်။ ကောင် မလေး နားက နေ သနပ်ခါး နံ သင်းသင်းလေးက ကျွန်တော့် စိတ်တွေကို ပိုပြီး နူးညံ့သွားစေတယ်။ သနပ်ခါး မ လေးရယ်… နောင်ဘ၀ ဆိုတာရှိခဲ့ရင် မင်းနဲ့ ကိုယ် ချစ်သူ ဖြစ်ပါစေ။ ကျွန်တော် အခုလို ပေါကြောင်ကြောင် ဆုတောင်း လိုက်တယ်။ ကောင်မလေးက ရုတ်တရက် ကျွန်တော်ကို လှည့်ကြည့်တယ်။ ကျွန်တော် ဆုတောင်း တာ ကြားများကြားသွားလား။ ဒီလေယာဉ်မှာ ဘိုတွေ တော်တော်များများပါတယ်။ ကင်မရာ လွယ်ထားတဲ့ ဘို ကို ကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်။ မတွေ့ဘူး။ ဓာတ်လှေခါး ပေါ်က ဆင်းလာတဲ့ လူတွေ ကုန်သလောက် တောင် ရှိနေပြီ။ ဘယ်မှာလဲ ဟိုနှစ်ယောက်။
` ညီလေး… ဟိုမှာ တွေ့လား…အဲ့နှစ်ယောက်ဖြစ်မယ်…´ ဘယ်ကနေ ဘယ်လို အနောက်က နေ ကိုသားကြီး ရောက်နေမှန်းမသိ။ ကိုယ့်အာရုံနဲ့ ကိုယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော် လန့် သွားတယ်။
` ဘယ်မှာလဲ…´ ကိုသားကြီးက စကားကို ဒီတိုင်းမပြောဘဲ ကျွန်တော့် နောက်ကနေ သူ့ကိုယ်ကြီးနဲ့ အတင်းဖိကပ်ပြီးပြောတယ်။ ပူနွေးနေတဲ့ အသားချောင်းကြီးက ကျွန်တော့် တင်ပါးတွေကိုလာ ကပ်ထားတယ်။ ခုနက ကောင်မလေး ကို ခုန်မိတဲ့ ရင်ခုန်သံတွေ ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်သွားတယ်။
` ဘောင်းဘီ တို အစိမ်းရောင်နဲ့လေကွာ…သူ့ဘေးနားမှာတွေ့လား….မျက်မှန်နဲ့… အဘိုးကြီး….´ ကျွန်တော် ကြည့်လိုက်တော့ အသက် ၃၀ ၀န်းကျင် တယောက်ရယ်။ သူ့ဘေးနားက ကိုသားကြီး အသက်နဲ့ မတိမ်းမယိမ်း သာရှိမယ်။ ဘိုတွေက သာမာန်အသက်အရွယ်ထက် ပိုပြီး အသက် ကြီး တယ်လို့ ထင်ရတယ်။ ကျွန်တော့် လက်ပေါ်က စာရွက်လေးကို သူတို့ နှစ်ယောက်မြင်သာအောင် ခပ်မြင့်မြင့်လေး ကိုင်ပြီး လှုပ်ပြလိုက်တယ်။ လူငယ်က တွေ့သွားပြီး ကျွန်တော့်ကို လက်ဝှေ့ယမ်းပြပြီး တချက် ပြုံးပြတယ်။ ဘုရားရေ… ။ ဒီလို ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အပြုံးမျိုးကို ကျွန်တော် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ခံနိုင်ရည်စွမ်း ရှိပါ့မလဲ။ ဘယ်ဘက် နှုတ်ခါး ပါးပါးကြားက သွားတက်လေး ပေါ်သွားအောင် ပြုံးလိုက်တဲ့ အပြုံးကို ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွန်တော် အပိုင် ၀ယ်ပြီး သိမ်းထားချင်တယ်။ တီရှပ် အစိမ်းရောင် ကျပ်ကျပ်လေးက သူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က ကြွက်သားတွေကို ထုတ်ကြွားနေသယောင်။ ဒူးနားထိသာ တိုတဲ့ အ၀ါနုရောင် ဘောင်းဘီ နဲ့ လိုက်ဖက်လွန်းနေ တယ်။ သူ့ကိုကြည့်ရသည်မှာ ကမ်းခြေ တခုခုက ပြန်လာတဲ့ ခရီးသွားသူ နှင့်တူနေတော့တယ်။
လူကို သာခဏလေး မြင်ရပြီး ကျွန်တော် နဲ့ ကိုသားကြီး တော်တော်လေး စောင့်လိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော့်ဘေးနား က ကောင်မလေးက ကျွန်တော် ထင်သလို သူ့ရည်းစားကို လာကြိုသာ မဟုတ်ဘဲ ယောကျာ်းပုံစံ ခပ်မိုက်မိုက် လေး ၀တ်ထားတဲ့ ဂျင်း ဘောင်းဘီ ကျပ်ကျပ်နဲ့ ကောင်မလေးကို လာကြိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် သေချာကြည့်လိုက် တော့ ယောက်ျားလျာမလေး က တော့်တော့်ကို ချောနေတယ်။ မိန်းမလို ကျကျနန မျက်နှာကို ချယ်လိုက်ပါက ဘေးနားက သနပ်ခါး မလေး ရှုံးသွားလောက်တယ် ။ ဘာလို့များ ယောကျာ်းလျာမလေး တွေ ဒီလောက်တောင် ချောနေရပါလိမ့်။ သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ မျက်ဝန်း တွေကို ကြည့်ရင် သေချာပါတယ်… သူတို့ နှစ်ယောက် မိန်းမချင်း ချစ်သူ တွေဆိုတာ။
စာကြွင်း။ ။ သိုးငယ်ရဲ့ ဒီတိုးဂိုက်ဝတ္ထုအသစ်ကို သူ့စီကတောင်းပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူရေးပြီးသမျှပါတဲ့။ အချိန်ရရင် ရသ လောက်ဆက်ရေးသွားမှာပါတဲ့လေ။ အိမ်နီးနားချင်း ဇာတ်လမ်းက သူဆက်ရေးဖြစ်ဖို့ဆိုတာ သိပ်မသေချာပါဘူးတဲ့။ သိုးငယ်စာကိုဖတ်ဖို့ စောင့်နေသူများအတွက် တဆင့်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 11:42 AM 1 comment:
နားနဲ့မနာ ဖ၀ါးနဲ့သာ နာပေးပါ ဆရာ။ ကျွန်တော်တို့တွေ လူလား မြောက်လာပြီဆိုရင်
ဘာတွေ ပြောင်းလဲလာသလဲဆိုတာ အသေးစိတ် သိချင်နေမိပါတယ် ဆရာ။ နောက်တစ်ခုက
မာစတာဘေးရှင်း လုပ်တာကို နည်းသွားအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ ပြောပြပေးပါ။
မရိုသေ့စကားပါ ဆရာ။ လိင်တံဟာ အခြားသူတွေလို မဟုတ်ဘဲ ညာဘက်ကို ကောက်နေပါတယ်။
ဆီးသွားရင်လည်း ဆီးလမ်းကြောင်းက သူများတွေလို ဖြောင့်ဖြောင့် မသွားပါဘူးဆရာ။
ဘယ်လို လုပ်ရင် ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်နိုင်မလဲ ဆိုတာကို သိချင်မိပါတယ် ဆရာ။
နောက်မေးတာ အရင်ဖြေပါမယ်။ မဖြောင့်ဘဲနေတာ ပြဿနာ မဟုတ်ပါ။ ခိုက်မိလို့ဆိုရင်တော့
တမျိုးပေါ့။ ဘယ်-ညာ၊ အပေါ်-အောက် မဖြောင့်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းကဆိုရင်
မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက်လို့လည်း မခေါ်ပါ။ လိင်တံရဲ့ အလုပ်ကိုလည်း ထိခိုက်မယ်
မဟုတ်ပါ။ ဆီးလမ်းမှာ ကျောက်ရှိရင်၊ ပန်းငုံရင်၊ ဆီးပြွန်ထဲ တခုခု ရှိနေရင်တော့
ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲလိုဆိုရင် ဆီးထွက် မဖြောင့်တာသာမက တခြား ခံစားရတာတွေပါ
(မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်တာ နည်းချင်ရင် နိုးဆွမှု ဖြစ်စေတာ မှန်သမျှ ရှောင်ရမယ်။
စိတ်ပါဘဲ။ ဒီအရွယ် ယောက်ျားလေး တွေမှာ တခြားလုပ်စရာတွေက နည်းနေတယ်။ စိတ်ကလည်း
ဘာမဆို ထက်သန်တယ်။ ပညာ-ဗဟုသုတ ကလည်း စုံသေးတာ မဟုတ်ဘူး။ များသောအားဖြင့်
မြင်ဆရာကို အားကိုးနေချိန်ဖြစ်လို့ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေ အပေါ်မှာလည်း
မူတည်သေးတယ်။ ကောင်းတဲ့စာတွေ ရွေးဖတ်ပါ။ အားကစား လုပ်ပါ။
လူပျိုလေးတွေ အကြောင်း အဓိကထားပြီး၊ အပျိုပေါက် အရွယ်ပါ ထည့်ရေးပါရစေ။ Puberty
ကို ဝေါဟာရ အနေနဲ့ တိတိ ကျကျ ပြောရရင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရင့်ပြည့်လာတာကို
ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပြီး၊ စိတ်ပိုင်း နဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးပိုင်း ပြောတာ မဟုတ်ပါ။
Adolescence အရွယ်ကြတော့ စိတ်ပိုင်း နဲ့ ဆက်ဆံရေးပိုင်းတွေက Adulthood
လူကြီးအရွယ် မတိုင်ခင် ကြားကာလကို ခေါ်တာ ဖြစ်တယ်။
လူပျိုဖြစ်လာတာ အပျိုဖြစ်လာတာ အားလုံး "ဟော်မုန်း" ပါဘဲ။ ကျား-ဟော်မုန်းကို
Testosterone ခေါ်ပြီး၊ မ-ဟော်မုန်းကို Estrogen ခေါ်တယ်။ ကျားရယ်၊ မရယ် ခေါ်ပေမဲ့
လိင်ဟော်မုန်း နှစ်မျိုးလုံး ရှိကြတာချည်းဘဲ။ အနည်း-အများသာ ကွာတယ်။ တခုခုက
ကဲနေရင် အသွင်သဏ္ဌာန်ရော၊ စိတ်ပိုင်းပါ မတူတာတွေ ဖြစ်တယ်။ လူတယောက်ထဲမှာတောင်
အရွယ်မတူရင် ပြောင်းလဲသွားတယ်။ အပြင်ကနေ ဟော်မုန်းပေးရင်လည်း ပြောင်းစေတယ်။
အသက် ၁၀ နှစ်ကနေ ၁၈ နှစ်အတွင်းမှာ လူပျိုပေါက်ဖြစ်စဉ်တွေ ဖြစ်လာတယ်။ အရပ်ရှည်၊
လူထွားလာချိန်မှာ ဦးနှောက်က အထာ မကျသေးတဲ့ အတွေ့အကြုံမျိုး ခံစားရတယ်။
စိတ်ပိုင်းအပြောင်းအလဲမှာ Aggressive ကြမ်းတမ်းစိတ် မျိုးလဲ ဖြစ်လာတယ်။
ရန်ဖြစ်ချင်လာတယ်။ တဆင့်ခြင်း ပြောရအောင်။
၁၀-၁၁ နှစ် အရွယ်။ စိတ်ပိုင်းမှာ ပြောင်းလဲလာတယ်။ လိင်ဟော်မုန်းတွေ
များလာတာမို့ လိင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်နဲ့ စကားပြောရတာကို
ငယ်ငယ်ကလို မဟုတ်တော့ဘဲ စကားပြော မထွက်တာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။
၁၁-၁၂ နှစ်အရွယ်။ ကျားအစိ Testis က မြန်မြန် ကြီးလာမယ်။ ကပ်ပဲ့အိပ် Scrotum
ကပါးလာပြီး၊ ပိုလည်း ရှုံ့တွကာ၊ အရောင်ပါ ရင့်လာမယ်။ အောက်ကို တွဲကျလာမယ်။
ဒီလိုဖြစ်တာ ဟော်မုန်းထွက်ဘို့ အားပေးရာကျတယ်။ ဆီးစပ်မွှေး Pubic hair
စပေါက်ပြီး၊ တဖြေးဖြေး နု-ဖြောင့်ရာကနေ၊ ကြမ်းပြီး၊ ကောက်ကွေးလာမယ်။ ကျားအင်္ဂါ
Penis က သန်မာမှု Erection ဖြစ်နိုင်လာမယ်။ တချို့မှာ တနေ့ထဲ အကြိမ် ၂၀ လောက်အထိ
ဖြစ်တယ်။ လိင်နဲ့ ပါတ်သက်မှ မဟုတ်ဘဲလည်း အဲလို ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ မနက်
အိပ်ရာထချိန် ဆီးအိမ် တင်းနေရင် ဖြစ်တယ်။ Morning wood ခေါ်ကြတယ်။ စာလုံးတွေကို
ဆက်ရေးတာက (ရော့ခ်) တီးဝိုင်းတခု နာမယ် ဖြစ်တယ်။
၁၂-၁၃ နှစ်အရွယ်။ ကျားအင်္ဂါ၊ အစိ၊ အိတ် ပိုရှည်၊ ပိုကြီး၊ ပိုမဲလာတယ်။
ဆီးစပ်မွှေး ပိုများလာမယ်။ အစိတခုက တခုထက် အောက်ပိုကျ နေတတ်တယ်။ ဒါကောင်းပါတယ်၊
သူတို့ အချင်းချင်း သိပ်မထိခိုက်ဘူးပေါ့။ ချွေးထွက်တာလည်း အဆီ ပြန်သလို
ဖြစ်လာတယ်။ ၀က်ခြံပေါက်မယ်။ ချိုင်းမွှေး ပေါက်လာတယ်။ ချိုင်းမွှေး ရှိနေသူဟာ
မရှိတဲ့လူထက် ချွေးထွက်တာ အဆ ၃၀ များတယ်။ ငယ်တုံးကထက် သန့်ရှင်းရေး ပိုလုပ်ဘို့
လိုလာတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျးအင်္ဂါအဖုံး အရေပြား အောက်မှာ အညစ်အကြေးတွေ ကပ်နေတာကို
အသာအယာ ရှင်းပေးရမယ်။ ကိုယ်နံ့လဲ ပြောင်းလာတယ်။ အနံ့ကနေ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်ကို
ဆွဲဆောင်စေနိုင်တယ်။ Ejaculation သုတ်ထွက် နိုင်လာမယ်။ Masturbation ကိုယ့်ဖါသာ
အာသာ ဖြေဖျောက်နည်း အလေ့အထ တတ်လာ၊ လုပ်လာမယ်။ သုတ်လွှတ် နိုင်တာဟာ Fertility
အရွယ်ရှိ မိန်းမနဲ့ ဆက်ဆံရင် ကိုယ်ဝန်ရစေနိုင်စွမ်းပါ ရလာတာ ဖြစ်တယ်။
၁၃-၁၄ နှစ်အရွယ်။ တနှစ်ကို အရပ်က ၄ လက္မနှုံးနဲ့ ပိုရှည်လာမယ်။ လိင်အင်္ဂါက
ပိုရှည်၊ ပိုထွားလာမယ်။ Glans penis ကွမ်းသီးခေါင်း ကလည်း ရှည်လာမယ်။ ကားလာတယ်။
၁၄-၁၅ နှစ်အရွယ်။ အသံသြလာမယ်။ အားကစားလို ပြိုင်ဆိုင်မှုလုပ်တာက
ကျားဟော်မုန်းထွက်မှာကို အားပေးရာ ကျတယ်။ ကိုယ့်ကို ချီးမွမ်း အားပေးတာခံရရင်
ကြက်သီးထတတ်လာမယ်။ ပိုပြီး ရှက်တတ်လာတယ်။
၁၅-၁၈ နှစ်အရွယ်။ စောစောပိုင်း နှစ်တွေကလို ကြီး-ထွား-ရှည် စတဲ့ တိုးတက်မှုတွေက
နှုံးအရ ပြောရရင် နဲနဲနှေးလာမယ်။ ရွယ်တူ မိန်းကလေးတွေ ထက်တော့ ပိုကြာတယ်။
ကြွက်သားတွေ ပိုသန်လာမယ်။ ပခုံး ပိုကျယ်လာမယ်။ ကျားလိင်အင်္ဂါ အားလုံး
လူကြီးဖြစ်လာပါပြီ။ လိင်တံက ရိုးရိုးအချိန်မှာ ၃့၂၅ လက္မကနေ ၄့၂၅ လက္မရှိပြီး၊
တောင့်တင်းချိန်မှာ ၅-၆-၇ လက္မအထိ ရှည်နိုင်လာမယ်။
အသက် ၂၀ ၀န်းကျင်။ ၁ စက္ကန့်မှာ သုတ်ပိုး ၁၀၀၀ ထုတ်နိုင်တယ်။ ကျားအင်္ဂါဟာ
အရွယ်ရလာနဲ့အမျှ ပိုကြီးလာနိုင်တယ်။ ဘာ့လို့လဲဆိုရင် Erectile tissues တွေရဲ့
ပြန်ကြုံ့နိုင်စွမ်း Recoiling strength လျှော့လာလို့ဘဲ။ အမွှေးအမျှင်လည်း
ပိုများလာတယ်။ ဟော်မုန်းတွေဟာ နေရာအများကြီးမှာ အလုပ်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။
ဦးနှောက်၊ အရိုး၊ ကြွက်သား၊ အရေပြား၊ ရင်သား၊ မျိုးပွါးအင်္ဂါတွေ ပါဝင်တယ်။
ကြီးထွားမှုဆိုတာ လူပျိုပေါက်ဖြစ်ရင် ပြည့်စုံသွားတယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။
မိန်းကလေးတွေက စောပြီး အရွယ်ရောက်တယ်။ ယောက်ျားလေးတွေက ၁၂ နှစ်၊ မိန်းကလေးက ၁၀
နှစ်လို့ ပြောနိုင်ပြီး၊ ပြည့်စုံတာကလည်း ၁၆-၁၈ နှစ် နဲ့ ၁၅-၁၇ နှစ် လို့
ကွာတယ်။ ယောက်ျား နဲ့ မိန်းမ ကွာခြားချက်ဟာ ပင်မလိင်အင်္ဂါတွေ သာမက Secondary sex
characteristics ဒုတိယ လိင်လက္ခဏာတွေ ဆိုတာလည်း ရှိတယ်။ ရင်သား (နို့)
ဆီးစပ်မွှေး Pubic hair ပေါက်တာက မတူကြဘူး။ ယောက်ျားလေးတွေမှာ လိင်တံအခြေနဲ့
ကပ်ပဲ့အိတ်မှာ စပေါက်ပြီး၊ နောက် လိင်တံအောက်၊ ချက်ဆီအထိ ပေါက်တယ်။ ပေါင်မှာလဲ
ပေါက်တယ်။ အရိုးတွေကလည်း ယောက်ျားတွေက ပိုလေးလံတယ်။ ကြွက်သားကြ ယောက်ျားက ၂
ဆတောင် ပိုတယ်။ အဆီလည်း ၂ ဆဘဲ။ ပခုံးရိုးနဲ့ မေးရိုးတွေ ကြီးထွားတာမှာလည်း
ပိုတယ်။ လူကြီးအရွယ်တွေကို ယှဉ်ရင် ကိုယ်ခန္ဓာထုထည်မှာ ယောက်ျားတွေက ၁၅၀%၊ အဆီက
မိန်းကလေးမှာ ပဌမဆုံး ထူးခြားတာက Breast ရင်သား ထွားလာတာပါ။ စစခြင်း
အရောင်ရင့်တဲ့ နို့သီးဝိုင်း Areola အောက်မှာ မာတင်းတင်း အစိုင်အခဲလေး
ဖြစ်လာတယ်။ တဖက်ချင်းလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ ပျမ်းမျှ ၁၀ နှစ်ခွဲသမီးမှာ ဖြစ်တယ်။ နောက်
၆ လ ၁ နှစ်မှာ ပြော့တဲ့ အစိုင်အခဲဟာ နို့သီးဝိုင်း Areola အပြင်ဘက်ကနေ
ပေါ်လာတယ်။ နို့သီးဝိုင်း ဟာ ပန်းရောင်၊ အညိုရောင် မတူကြဘူး။ အပျိုစစ် နေသ၍
(ကိုယ်ဝန် မဆောင်ဘူးသေးချိန်အထိ) ထိပ်ဖျားမှာ ပန်းရောင်လေး ရှိနေရမယ်။
အရွယ်အစား၊ ပုံပန်း၊ အတော်မတူကြဘူး။ အများစုက ဘယ်ဘက်ကပိုပြီး အရွယ်ကြီးတယ်။
ဆီးစပ်မွှေး Pubic hair ပေါက်လာတာက မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဒုတိယ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်တယ်။
မအင်္ဂါနှခမ်းသား Labia ဘေးကနေ စတယ်။ နုနု-ဖြောင့်ဖြောင့်လေးတွေက နောက်မှာ
ကြမ်းပြီး ကောက်ကွေးလာတယ်။ ပေါက်တဲ့နေရာတွေပါ ကျယ်ကျယ်လာတယ်။ ၁၅%သော
မိန်းကလေးတွေမှာ ဒီအပြောင်းအလဲက ရင်သား ဖွံ့ထွားတာထက် ပိုစောတတ်တယ်။
မိန်းမတွေမှာ အများအားဖြင့် တရိဂံ-စောက်ထိုးပုံနဲ့ ယောက်ျားတွေမှာ
တရိဂံ-အတည့်ပုံ ဖြစ်တယ်။ လူမျိုးအလိုက်၊ မျိုးရိုးအလိုက်တော့ ကွာတယ်။ Pubic
hair နဲ့ ဆံပင်အရောင်၊ ချိုင်းမွှေးအရောင် အတူတူ ဖြစ်ခြင်မှ ဖြစ်မယ်။
မွေးလမ်းကြောင်း Vagina ကို ဖုံးနေတဲ့ အရေပြားနု Mucosa က ပိုထူလာတယ်။ အရင်
ခပ်ရဲရဲကနေ ပန်းရောင် ခပ်မွဲမွဲ ဖြစ်လာတယ်။ စွပ်စိုမှုလည်း ရှိတာတယ်။ သားအိမ်
Uterus နဲ့ မျိုးဥအိမ် Ovaries တွေက အရွယ်ပိုကြီးလာတယ်။ ရာသီ ဆင်းတယ်လို့
ခေါ်တဲ့ Menstruation စဆင်းလာတယ်။ သားအိမ် အတွင်းဆုံးအလွှာက လအစမှာ ပါးရာကနေ
ထူလာပြီး၊ နောက်ဆုံး ပျက်စီးသွားလို့ ထွက်တဲ့ သွေးနဲ့ တစ်ရှူးအပျက်အစီးတွေ
ဖြစ်တယ်။ ပျမ်းမျှ ၁၁့၇၅ နှစ်အရွယ် ဖြစ်တယ်။ ဖြစ်စ အရွယ်မှာ ရာသီဆင်းတာက တလ
တခါရယ်လို့ မမှန်သေးဘူး။ မျိုးဆက်ပွါးနိုင်စွမ်း Fertility ရှိလာတာ ဖြစ်တယ်။
အဲဒါက မျိုးဥအိမ် Ovary ကနေ မျိုးဥ Ovum ထွက်နိုင်စွမ်းရှိလာမှ ဖြစ်တယ်။ ပဌမ ၁
နှစ်မှာ ၈၀% မိန်းကလေးတွေမှာ မျိုးဥ မထွက်ဘဲ ရာသီးသာဆင်းတယ်။ ၅၀%က ၃ နှစ်အထိ
ဒီလိုဘဲ။ ၆ နှစ်အထိ ကြာတာတောင် ၁၀% မိန်းကလေးတွေမှာ မျိုးဥမဲ့ ရာသီဖြစ်ကြတယ်။
မိန်းကလေး အရွယ်ရောက်ချိန်က သွေးဆုံးချိန်လိုဘဲ၊ မျိုးရိုးလိုက်နိုင်တယ်။
အစာအာဟာရ ကနေလည်း လွှမ်းမိုးနိုင်တာက မိန်းကလေးတွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။ တနေ့တာ
စားတဲ့ထဲကနေ ပိုနေတဲ့ (ကယ်လိုရီ) တွေကို အဆီစုထားလို့ပါ။ ၀တဲ့သူ၊ အားကစား၊
လေ့ကျင့်ခန်း၊ မလုပ်သူတွေ အပျိုဖြစ် စောတယ်။ နာတာရှည် ရောဂါ ရှိနေရင်
ယောက်ျားမှာ မိန်းမနဲ့ မတူတာတွေထဲမှာ အမွှေးပေါက်ပုံပါတယ်။ မျက်နှာမှာ
အမွှေးပေါက်တာ ယောက်ျား။ ပေါင်ရှေ့ပိုင်း ကြွက်သား ယောက်ျားမှာ ပိုသန်မာတယ်။
ပေါင်နောက်ပိုင်းက ပိုသန်မာတာက မိန်းမ။ လည်စေ့လို့ခေါ်တဲ့ Adam's apple က
ယောက်ျားမှာသာ ရှိတယ်။ ရင်ပတ်ကား၊ ပခုံးကျယ်တာ ချွေးပိုထွက်တာ၊
၀က်ခြံပိုပေါက်တာ ယောက်ျား။ အရေပြား လည်း ပိုကြမ်းတယ်။ သူ့အောက်မှာ အဆီစုတာ
မိန်းကလေးတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာပုံပန်းကလည်း ထူးခြားလာတယ်။ တင်ပိုင်းရဲ့
အောက်ပိုင်းတ၀က်က ဘေးကားလာတယ်။ ရင်သား၊ တင်-တင်ပါး၊ ပေါင်၊ လက်မောင်း၊
ဆီးစပ်နေရာတွေမှာ အဆီစုဝေးလာတယ်။ ဗမာတွေက ခါးသေး-ရင်ချီလို့ ပြောကြတယ်။
ဆေးစာလိုပြောရရင် Waist-hip ratio (WHR) ခါးနဲ့ တင် အချိုးလို့ပြောတယ်။
တိတိကျကျ ဆိုချင်တာက အကျဉ်းဆုံးခါးက ဘယ်နှစ်လက္မ၊ အကားဆုံး တင်ပိုင်းက
ဘယ်နှစ်လက္မ ဆိုတာ တိုင်းထွာပြီး၊ အချိုးချ လိုက်တာပါ။
ပိုအရေးကြီးတာက ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို သက်ရောက်သလဲ။ အမျိုးသမီးဆိုတာ Pear-shaped
body ဖြစ်တယ်။ Apple-shaped body ဖြစ်သူတွေမှာ ရောဂါတွေ ပိုဖြစ်တယ်။
မိန်းမတယောက်မှာ ၀့၇၊ ယောက်ျားမှာ ၀့၉ ရှိနေရင် ကြည့်ရတာ အချိုးကျတဲ့အပြင်
ကျန်းမာရေးလည်း ကောင်းလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေးလိုဘဲ ဆွဲဆောင်မှု ဆိုတာလည်း
အရေးပါတယ်။ WHR ကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ဆွဲဆောင်မှု ကောင်းတယ်။ ဆိုပါစို့
Marilyn Monroe နဲ့ Sophia Loren တို့ဟာ WHR ၀့၇ တွေ ဖြစ်ကြတယ်။
တရုပ်အမျိုးသမီးတွေမှာ ၀့၆၊ တောင်အမေရိကနဲ့ အာဖရိကမှာ ၀့၉ လို့ သိရတယ်။
စာဖတ်သူနဲ့ တူ-မတူတော့ မပြောတတ်ဘူး၊ သုတေသနတခုက "မိန်းမတယောက် ခါးသေးတာဟာ
တင်ကားတာထက် ဆွဲဆောင်မှု ပိုရှိတယ်" လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လားတော့
မပြောတတ်ဘူး၊ အမျိုးသမီးတွေ Corset ခေါ်တဲ့ ခါသေး၊ Hip and buttock padding
ခေါ်တဲ့ အခုအခံတွေ သုံးကြတာပေါ့။
အဲလို အတုအပ မဟုတ်ကြသူ အမျိုးသမီးတွေမှာ ခါး-တင် အချိုးဟာ တဖက်သားကို
ဆွဲဆောင်နိုင်တာ သာမကဘဲ၊ ဥာဏ်ရည်လည်း သာတယ်လို့ ဆိုသေးပါတယ်။ အဲလို
အမျိုးသမီးကနေ မွေးတဲ့ ကလေးတွေကပါ ကျောင်းမှာ စာပိုတော်ကြသေးသတဲ့။
Posted by Alex Aung at 2:28 PM No comments:
ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာမြို့ကြီးမှာ လမ်းဆုံလမ်းခွ၊ ဈေးရောင်းဝယ်ရာ ဈေးရုံများ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများ အားလုံးလိုလိုမှာ အမျိုးသားသုံး၊ အမျိုးသမီးသုံး အိမ်သာဆိုပြီး ရှိတတ်ကြတာ လူအများအသိနော်။ တစ်ချို့နေရာတွေမှာတော့ မြေအောက်အိမ်သာလိုမျိုးရှိတတ်ကြပါ တယ်။ များသောအားဖြင့် အညစ်အကြေးစွန့်ဖို့ဆိုပေမဲ့ အိမ်သာနံရံတွေမှာ အချိန်းအချက်ပြုတဲ့စာ၊ ညစ်ညမ်းပုံတွေ၊ တစ်ချို့အခန်းနံရံ တွေမှာတော့ ကြော်ငြာတွေလို ဆက်သွယ်ရမယ့်လိပ်စာ၊ဖုန်းနံပါတ်တွေ တစ်ခုတောင်မဟုတ် နှစ်ခုဖြစ်ဖြစ် ရေးထားတတ်ကြတာ။ မလင်း တလင်း မီးရောင်အောက်မှာထိုင်ရင်း ကျွန်တော်တို့လို လူမျိုးအနည်းစုအတွက်တော့ ၀ိုးတ၀ါးစာသားများဟာ 'ဘာလဲ? အကယ်၍' အတွေးများဝင်စေပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း လိပ်စာရေးခဲ့ပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ရှာသူမောအောင် ချာချာလည်အောင်လုပ်ထားခဲ့တယ်။ တကယ်တန်းတွေ့ချင်ရင်ဟုတ်ရဲ့ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ပြဿနာဖန်တီးချင်ရင်လည်းရတယ်မဟုတ်လား? တယ်လီဖုန်းဆိုတာရဲ့ အခြားတစ်ဖက်မှာ လူစိမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ အသံနှင့်ဟန်က ကျွန်တော့် လိုအပ်ချက်နှင့် အံကိုက်ဖြစ်ပါ့မလားလို့ တွေးမိရသေးတယ်။
စနေနေ့တစ်ရက်ရဲ့ ညနေခင်းတစ်ခုမှာ မြို့လယ်ခေါင်မြေအောက်အိမ်သာရဲ့ နောက်ဘက်နံရံမှာ 'cock wanted' လို့မထင်မရှား ကုတ် ခြစ်ရေးခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော့်ဖုန်းနံပါတ် အပါအ၀င်ပေါ့နော်။ စာကြောင်းရဲ့ အဆုံးသတ်မှာတော့ ဖုန်းကိုကိုင်ထားရင်တော့ တိုက်ရိုက် အဆက်အသွယ်လုပ် လို့ရမယ်၊ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ မိမိရဲ့အသက်၊လိင်၊ဘယ်အချက်တွေက ဖြစ်စေတယ် စသဖြင့် မိတ်ဆက် သဘော ပို့ထားဖို့ရယ်၊ အဓိကအရေးကြီးတာက ကျွန်တော့်အသွင်အပြင်နှင့် အသက်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ဖို့ အရေးပါကြောင်းတွေကိုရော ရေးခဲ့ပါတယ်။
သူများတွေလိုပဲ နည်းစနစ်တကျသွားခဲ့တာပါပဲ။ ကျွန်တော့်ဖုန်းနံပါတ်ကို နံရံမှာရေးခြစ်ခဲ့တယ်။ ရေးထားခဲ့တဲ့အတိုင်း car parking မှာ အသာသွားရပ် ထားရင်း ကားပေါ်မှာထိုင်ပြီးစောင့်နေလိုက်တယ်။ နှစ်နေရာလောက်မှာ ကျွန်တော်ခြစ်ပြုရေးသားခဲ့တာ အရေးပေါ် သ ဘောပေါ့နော်။ အချို့သောရိုက်စား ဒါမှမဟုတ် အချို့သော ဟာသမြောက် အနှောင့်အယှက်တွေကို မျှော်လင့်ထားရင်းပေါ့။ အများသုံး အိမ်သာနံရံမှာရေးသားခဲ့တာဆိုတော့ အပေါစားဆန်ပေမဲ့ အလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသိသာလို့ပါလေ။
ဖြစ်လာမယ့်အရာတွေ တွေးမိရရင်းကို ပေါင်ကြားက ငပဲဟာ မာတောင်လာရပြီ။ ကျွန်တော့်ရဲ့လိင်ကိစ္စအာရုံမှာ နှစ်သိမ့်ကျေနပ်မှု မရှိ လွန်းခြင်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ရဲ့။ ကျွန်တော့်မိန်းကလေးရည်းစားက ကျေနပ်အားရမှုကို မပေးစွမ်းနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ဟာ bi-sexual တစ်ယောက်ဆိုတဲ့ အသိဥာဏ်ဗဟုသုတရှိခဲ့ရသလို ပျော်ရွှင်မိခဲ့တာအမှန်ပါ....ဖြစ်နေသော လိင်စိတ်အပေါ်ပေါ့။
ကူးယူလာတဲ့ နံပါတ်တစ်ခုကို အသာခေါ်လိုက်ရင်း ရင်တဖိုဖိုနှင့် တုန့်ပြန်မှုကို စောင့်လိုက်ပါတယ်။ မသေချာတဲ့ အဖြေတချို့ကို ကြိုတင် ခန့်မှန်းရင်း။ Wow! ငနဲတစ်ပွေပဲ။ ကြားရတဲ့အသံက အိုကေတယ်။ သူ့အသက်က ၃၄၊ ကျွန်တော့်လို bisexual တစ်ယောက်၊ ပြီးတော့ အတော် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိတဲ့ဖြောင့်ချက်ကို ပေးခဲ့တယ်ဗျ ကျွန်တော့်ကို။ -ီးစုပ်ရတာတော်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုပဲ။ ဒါကြောင့် အိမ်သာနံရံ မှာ နံပါတ် ကိုရေးသားခဲ့ခြင်းပါ။ မှန်ကန်တဲ့ ပါတနာရဖို့တော့ သူမျှော်လင့်နေတာဆိုပါလား။
ကျွန်တော်တို့ ခရစ်ယာန် နာမည်တွေကိုအပြန်အလှန်လဲလှယ်အသိပေးဖြစ်ကြတယ်။ သူက Peter ၊ ကျွန်တော်က Alex ပေါ့။ ကျွန်တော့် အသက်က ၄၀နှစ်ဆိုတာ အပါအ၀င် လိပ်စာကဒ်မှာ ရေးထားသမျှရွတ်ပြလိုက်ပါတယ်။
'အသက်ကြီးပြီး နည်းနည်းပြည့်တဲ့လူကိုကြိုက်ပါတယ်' လို့သူကပြောရင်း ဘယ်အချိန်တွေ့ချင်လဲ မေးပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ ကားပါလာ ကြောင်း Four Wheel ကားဖြစ်ပြီး နေရောင်ကာ မှန်အမည်းတွေရှိတဲ့ကားလို့ ပြောလိုက်တာပေါ့လေ။
'Wow! အကောင်းဆုံးပဲ။ စောင့်တောင်မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။ ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာမှာလဲ Alex?'
စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အတူ ရင်ဖိုတဲ့ခံစားချက်ရော ကျွန်တော့် ဂျင်းဘောင်းဘီအောက်က ညီဘွားကို ဒီလူစိမ်းက ဘယ်လိုများပြုစုပေးမှာ လည်းဆိုတဲ့ တောင့်တမှုကရော စည်းချက်ကျကျ။ မလှမ်းမကမ်း ကော်ဖီဆိုင်ရဲ့ ပိတ်ချိန်ဖြစ်တဲ့ နောက်ထပ်တစ်နာရီအကြာ ကားပါကင် မှာ Peter နှင့်တွေ့ချိန်ရောက်တော့ အဲဒီငနဲက တော်တော်စတိုင်လ်မိတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တွေးထင်ထားခဲ့သလို မဟုတ်ရပါဘူး။ ခန့်ညားတဲ့ရုပ်ရည်နှင့်အတူ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သူလည်းဖြစ်ပါရဲ့။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသား မျက်နှာချင်းဆိုင်တော့လည်း အရင်က သိကျွမ်းပြီးသားပြုမူဆက်ဆံပုံဟန်သူခေါ်ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်မကြာခင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရတာက သူဟာ သီးသန့်ဆန် လွန်းတဲ့ အကျင့်စရိုက်ရှိသူ၊ တကယ့်ကို သီးသန့်ဆန်လွန်းသူပါပဲ။ အာသာဆန္ဒမပြည့်ဝသေးလို့သာ ကျွန်တော်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်မယ် ထင်ပါ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကြိုက်ခြင်း မကြိုက်ခြင်းတွေကို အပြန်အလှန်ပြောပြပြီး ချိန်မှာတော့ သူဟာ ကျွန်တော့်အတွက်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ် လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကားရှေ့ခန်းမှာ ကြာကြာမထိုင်ဖြစ်ကြဘဲ ပိုမိုစိတ်ချရတဲ့နေရာကိုရွေ့ဖို့ Peter ကအကြံပေးတဲ့အတိုင်းသွားကြပါတယ်။ အမှောင်ကဲတဲ့ လုံခြုံရေးသိပ်မတင်းကြပ်တဲ့ car parking တစ်ခုကိုသွားဖြစ်ကြပါတယ်။ မဆိုးဘူးဗျ သူပြောတဲ့အိမ်ယာရဲ့ ကားရပ်ရန်နေ ရာက သီးသန့်နေရာတစ်ခုလို အနှောင့်အယှက်သိပ်မရှိဘူး။ ချောင်ကျကျနေရာမှာ ကားကိုအသေအချာရပ် ဘေးဘီကိုတစ်ချက်ကြည့် လိုက်ကာ ပေါင်ကိုကားပြီး သူ့လက်တွေထိလို့ရအောင် ကျွန်တော့် ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးလိုက်တယ်။ သူစိတ်အားထက်သန်စွာ နှင့် အရာအားလုံးကိုပွတ်သပ်နမ်းရှုံ့တော့တာ။ ခဏတာလေး မတ်တပ်ရပ်ပေးလိုက်သေးတယ် လုံူးဝန်းပြည့်တင်းတဲ့ ကျွန်တော့်တင်ပါးဆုံ ကို ကိုင်တွယ်ချင်မလားလို့။ လက်ဖ၀ါးတွေနဲ့ပွတ်သပ်ပြီး အတန်ကြာ ဖျစ်ညှစ်တာကိုခံစားရပါရဲ့။
'အရမ်းကိုလှတာပဲ Alex, အခုချက်ချင်းတောင်စားချင်လာပြီ'
နှစ်ယောက်သား ကားအနောက်ခန်းကို ရွေ့ကြပါတယ်။ တံခါးတွေကိုလော့ခ်ျလုပ်လိုက်ရင်းပေါ့။ နောက်ဆိုဖာမှာပေါင်ကို ကားပြီး ဘောင်းဘီကို ကျွန်တော်ချွတ်လိုက်တော့ သူ ကားကြမ်းပြင်ပေါ် ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ရော။ နုညံ့တဲ့ သူ့လက်ဖ၀ါးတွေက ကျွန်တော့် ခြေဖျားကစလို့ ပေါင်တံတွေဆီ တဖြည်းဖြည်းရွေ့လာတော့ မျက်လုံးများကိုမှိတ်ကာ ကောင်းမွန်လှတဲ့ သူ့ပွတ်သပ်မှု ဆော့ကစားမှုတွေ ကို အရသာခံစားလိုက်ပါတယ်။ အရမ်းကောင်းတယ်ဆိုတာ စစ်မှန်တဲ့ စကားလုံးဖြစ်မှာပါပဲ။ တကယ့် သူစိမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ ပြုစုမှု အောက် အပြည့်အ၀ကို နစ်မျောလိုက်တာ။ အချိန်သိပ်မဆိုင်းဘဲ သူ့လျှာဖျားလေးဟာ ကျွန်တော့်ပေါင်ခွဆုံစီ အလုပ်များစပြုလာတယ် လေ။ မမာ့တမာ ကျွန်တော့်ငပဲထိပ်လေးကိုလျှာလေးနှင့် အသာတို့တို့ပြီးလျက်၊ နောက်ပြီး လျောကနဲနေအောင် စုပ်မျိုလိုက်တာ ရင်ထဲ သိမ့်ကနဲပါပဲလေ။ ထောင့်ပေါင်းစုံ အနေအထားအမျိုးမျိုးပြောင်းကာ သူ့လျှာ သူ့အာတွေနဲ့ ပြုစုတာများ မျောလောက်ပါတယ်။ တပြိုင် တည်းလိုလိုပဲ သူ့လက်နဲ့ ရွှေဥတွေကိုပွတ်သပ်လိုက် တစ်ခါတစ်ခါ ဖျစ်ညှစ်လိုက်လုပ်နေသေးတာ။
ငပဲကိုလျှာတွေ အာတွေနှင့် ပြုစုလို့ မည်တဲ့အသံ၊ တစ်ချက် တစ်ချက်အသက်ကို ခက်ခဲစွာ ရှူလိုက်သောအသံတွေကြောင့် သွေးပိုကြွရ သလို သူ့မျက်ခွံတွေကိုလှန်ပြီး ကျွန်တော့်မျက်နှာခံစားချက်ကို ရီဝေေ၀ကြည့်မှုတွေကြောင့်လည်း သူဘာပြောချင်နေတာကိုလည်း သဘောပေါက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွင်းခံကို နှုတ်ခမ်းတွေ သွားတွေနှင့် ကိုက်ဆွဲပြီးချွတ်တော့မှ သူ့ပါးစပ်ရဲ့ စိုစွတ်နေမှုနှင့် အာသာ ဆန္ဒပြင်းပြမှုကို သဘောပိုကျရပါ၏။
'ခင်ဗျား -ီးကိုကြိုက်တယ်ဗျာ, Alex' 'စုပ်ရတာရော၊ နမ်းရှုံ့လို့ရတဲ့ အနံ့အသက်ကိုရောဗျာ။ -ိုးရတာရောကြိုက်လာ? ကြိုက်တယ် ဆိုရင်....'
သူဝတ်ထားတဲ့ ဂျင်းကြပ်ကြပ်ကို လျောချွတ်လိုက်တာ အပြာရောင်မှာ ရွှေရောင်အစင်းကြား အတွင်းခံဘောင်းဘီမှ ရေမွှေးနံ့လို ကိုယ် သင်းနံ့လေးရလိုက်ပါတယ်။ လှလိုက်တာဗျာ..။ အောက်ပိုင်း တော်တော်လှတဲ့ ငနဲပါပဲ။ သူ့အမေးကို ကျွန်တော်က ဘောင်းဘီထဲက ခေါင်းထောင်ထနေတဲ့ ပစ္စည်းကြီးကို စမ်းသပ်ရင်း အဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ ခင်ဗျား ထင်ထားသလို ထိပ်အရေပြားတော့ဖြတ်မထားဘူး ကျွန်တော့်အကြိုက်ကို သူက သတိတရပြောသေးတာ။ ကျွန်တော်က ထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားတဲ့ လိင်တံကိုကြိုက်တယ်၊ သန့်ရှင်းရလွယ် ကူ အနံ့အသက်ကင်းတယ်လေ။ လိင်တံကင်ဆာဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းနည်းစေတယ်ဆိုထားတာ ကြားဖူးတယ်မဟုတ်လား? ထားပါ၊ ထိပ် အရေပြားမပါတာ ပါတာထက် သူ့လှုပ်ရှားမှုကို စောင့်ကြည့်ရဦးမယ်။
'သိပ်မရဲနဲ့နော်....ငါ့ပစ္စည်းကကြီးတယ်' သူက ဘာမှ မတုန့်ပြန်ဘဲ ငြိမ်နေတာကြောင့် တင်းရင်းပြီးလုံးနေတဲ့ အတွင်းခံအပေါ်ကနေ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေနှင့် သူ့တင်ပါးတွေကို ပွတ်ဆွဲပြီး ကိုယ်သင်းနံ့ကို ပိုမိုရယူလိုက်ပါတယ်။ ရရှိတဲ့အထိတွေ့၊ ရင်ခုန်ဖွယ် ရနံ့များက သူနှင့်အတွင်းကျကျ ပိုမိုပတ်သက်ဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်မိစေပါရော။ ဘောင်းဘီမျှော့ကြိုးကြားကနေ လက်လျှိုပြီး သကာလ တင်ပါးဖြိုးအိအိကို ကိုင်တွယ်ရင်း ခရေ၀ကိုလည်း မျှော့သွေးစမ်းရသေးတာ။ ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ၇လက်မနီးပါး ရှည်ရှည်တုတ်တုတ်ငပဲဟာ မတ်ပြီး ထောင်နေတာက Peter လိုအပ်ချက်နဲ့ပြောစကားကို ထောက်ခံနေပါတယ်။ ခရေ၀အတွင်းထဲကို သွင်းဖို့ သူက ထပ်မံမြှူဆွယ်လာပြန် တော့ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကျွန်တော်စတင်ရပါ၏။ သန်းခေါင်ကျော်တဲ့ မနက်အစောပိုင်း ကျွန်တော့်ကားအနောက်ပိုင်းမှာ အံ့အား သင့်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ ကစားပွဲတစ်ခု ဖြစ်တည်ပြီပေါ့။
'အိုကေတာပေါ့! ဒီအနေအထားက ခင်ဗျားအတွက် အဆင်ပြေမလား?' ကျွန်တော်ထိုင်နေတာကို ဘေးနည်းနည်းရွေ့ပေးလိုက်ပြန်တော့ သူက ကျွန်တော့်နံဘေးမှာ ဘေးတစောင်းပုံစံ ခြေတစ်ဖက်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ်ချ အခြားတစ်ဖက်ကို ရှေ့ထိုင်ခုံနောက်မှီပေါ်လှမ်းတင်လိုက် ရင်း ခပ်ကားကားအနေအထားနဲ့ တင်ကိုနောက်ပစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တင်ပါးအိအိထွေးထွေးဟာ ခပ်ဟဟနှင့် ကျွန်တော်-ိုးဖို့ အတော် အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားပါ။
'အပေးကတော့ မိုက်တယ်ကွာ Peter' ကျွန်တော်ကြည်နူးမိရလောက်အောင် သူ့တင်ပါးပုံသ္ဌာန်က တကယ့် တကယ် လုပ်ချင်စိတ်ကို ဖြစ်စေနိုင်စွမ်းပါတယ်။ တင်ပါးတစ်ဖက်ကို လက်နဲ့အသာဆွဲဟကာ ကြပ်သိပ်နေတဲ့ သူ့ခရေ၀ကို လက်ခလယ်လေးဖိဖိသွင်းပြီး တွင်းဝ ချဲ့ရပါသေး။ ကားရှေ့ခန်း ခြင်းလေးထဲက Baby Cream ဘူးကိုလှမ်းယူလိုက်ကာ ခရေ၀မှာ ရွှဲရွဲစွတ်လိုက်ပါတယ်။ သူ့လက်က ကျွန်တော့်ငပဲကို မလွှတ်ဘဲဆုပ်ကိုင်မြဲ ဆုပ်ကိုင်ထားသေးတာက ကျွန်တော့်လှုပ်ရှားမှုကို ဆက်လုပ်စေဖို့ အားပေးပါရဲ့။ အဖုလေးတွေ ပါတဲ့ ဆိုဒ်လွန် condom တစ်ခုကို ကျွန်တော့်ငပဲမှာစွပ်လိုက်ရင်း စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ Peter ခရေတွင်းဝမှာ တေ့လိုက်ကာ ခပ်ဖြေးဖြေးဖိ သွင်းလိုက်ပါတယ်။ ကြပ်သိပ်နေတဲ့ ခရေကြွက်သားတွေရဲ့ ဖျစ်ညှစ်မှု၊ ပူနွေးတဲ့အတွေ့တွေကြောင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်းမသွင်းဘဲ တစ်ထစ် ခြင်း ကျွန်တော်ကြိုးစားသွင်းရပါ၏။ ထုံးစံအတိုင်း စိတ်မထိန်းနိုင်ဘဲ သူ့တင်ပါးကို တစ်ချက်နှစ်ချက်ရိုက်မိတော့ 'နောက်တစ်ချက်.... နောက်တစ်ချက် ခပ်ပြင်းပြင်းလေး' သူ့ အော်သံခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့ ထောက်ခံတော့ ကျွန်တော်လည်း ဆက်ပြီး ရံဖန်ရံခါ ရိုက်ခတ်မိပါတယ်။ ရိုတ်ခတ်မှုကြောင့် ရဲသွားတဲ့ တင်သားတွေက စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ပိုရင်ခုန်စေပါလားလို့လေ။
အခု သူ့ကို-ိုးနေရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ သူလုပ်တာကို ခံချင်လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုအခြေအနေကလည်း အဆင်ပြေနေသား။ ကျွန်တော့်ဆောင့်သွင်းချက်တွေဟာ မပြင်းလွန်း မနှေးလွန်း လှုပ်ရှားတာ သူ့အတွက် ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားစေတယ်ထင်ပါတယ်။ သူ့လှုပ်ရှား မှုဟာ ပြင်းထန်လာသလို တင်ပါးတွေကိုနောက်ပြန် ကစားပေးမှုကလည်းအရှိန်ပါလာရော။ အတွင်းထဲ ပိုမိုရောက်စေချင်ဟန်။
ကျွန်တော် ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့ အပြင်ကိုရောက်သွားရပါပြီ။ Peter ကို-ိုးရတာ တကယ့်ကို အနှစ်ပါပဲဗျာ။ သူရော ကျွန်တော်ပါ နှစ်ဦးသား စိတ်ဇောဟုန်ပြင်းပြင်းနှင့် စည်းချက်ကျကျ ဆင်နွှဲကြတာ သူ့တင်ပါးတွေထဲ ကျွန်တော့်ပစ္စည်းကြီး ပိုပိုနစ်ဝင်သွားရပါတယ်။ ဘေးကကြည့် ရင် မော်တော်ကားကြီးလှုပ်နေမလား မတတ်နိုင်ဘူး ကျွန်တော်ကလည်း ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်ပြီး -ိုးတယ်၊ သူကလည်း ခါးကိုလှုပ်တင်ကို နောက်ပြန်ပစ်ပြီး ကစားပေးနေတာအပြင် နှုတ်ကလည်း စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ညည်းတွားသံကို ပြုသေးတာ။ သူ့တင်ပါးအလုံးစုံဟာ ကျွန်တော့်အတွက်၊ ကျွန်တော့်ငပဲကြီးဟာ သူ့အတွက်ဖြစ်နေကြပြီလေ။ ခဏနေတော့ လှုပ်ရှားနေတာ အားလုံး အသာရပ်ကြကာ အမောဖြေရင်း ခရေတွင်းထဲ ငပဲကျင်းစိမ်တဲ့အရသာကို ခံစားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ climax ဖြစ်တည်လာတာကြောင့် နှစ်ဦးသား စတင်လှုပ်ရှားကြပြန်ရော။ ဒီတစ်ခါတော့ အနောက်ကနေ ကျွန်တော်ညှောင့်နေရင်း လက်တစ်ဖက်နှင့် သူ့ငပဲကိုကိုင်ကာ ခပ် သွက်သွက်ကစားပေးလိုက်တာ အသက်ရှူသံပိုမိုပြင်းထန်လာကာ သူ့ကိုယ်လုံးတဆတ်ဆတ်တုန်လာကာ climax ရဲ့အဆုံးစွန်ကို သူ ရောက်ရှိသွားပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ဆက်လက်ဆောင့်သွင်းရင်း အဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ ချွေးအရမ်းထွက်ပြီး နည်းနည်းနားချင်တာကြောင့် သူ့ခရေ၀က ငပဲကိုချွတ် condom ကိုဖယ်ကာ ကားဆိုဖာပေါ် ပိုးလို့ပက်လက် အတူတူ လှဲနေကြပါရော။
အံ့အားသင့်ဖွယ်အရာတွေ စတင်လာတော့မယ်ဆိုတာ Peter ရဲ့ပြောစကားများနောက်ဝယ် သိစပြုလာပါတယ်။ သူကပြောတယ်လေ မြေအောက်အိမ်သာနံရံပေါ်မှာ ထပ်ပြီး ကြေငြာစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့။ 'ခင်ဗျားငပဲကို ကောင်းကောင်း-ုပ်မယ်ဗျာ။ ပြီးတော့ နောက်တွေ့ မယ့် အကြိမ်တွေကျရင် စိတ်ကြိုက်ထပ်နွှဲဖို့ ပြင်ဆင်ကြတာပေါ့နော်'
သူ့စကားအတိုင်း နှုတ်ခမ်း၊လျှာ၊အာခံတွင်းတွေ သုံးပြီးကျွန်တော့်ငပဲကိုပြုစုတာ ခပ်ပျစ်ပျစ်သုတ်ရည်တွေ သူ့အာခံတွင်းထဲ ပန်းထည့် တာကို မျက်လွှာတောင်ပင့်မကြည့်ဘဲ မျိုချပစ်ပါတယ်။ သူ့အပြုအမူက ကျေနပ်ပီတိဖြစ်မှုကို ပြနေသလားပဲ။
အိုး....နံရံပေါ်က ကူးယူခဲ့တဲ့ message လေးဟာ ကျွန်တော့်အတွက် တော်တော်ကျေနပ်နှစ်သိမ့်စေပါလားလို့နော်
Alex Aung (25-4-2011)
Posted by Alex Aung at 2:41 PM 1 comment:
ကောလိပ် ဒုတိယနှစ်မတိုင်မီ ကျောင်းကပိတ်ထားတာဆိုတော့ အခုလောလောဆယ် ကျွန်တော်က ဟိုသွားဒီသွား။ ဒါပေမဲ့ကျောင်းပြန် ဖွင့်ရင် အခြားဘဲနှစ်ပွေနှင့် တစ်ခန်းထဲအတူနေရမယ်လို့ အဆောင်မှူးက ပြောထားတယ်။ ဇော်ဇော်နှင့် သူရတို့လို့ပြောတာပဲ။ အဲဒါ ကြောင့် ကျွန်တော် အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ် ဘယ်သူက ကျွန်တော့်အတွက် အကောင်းဆုံးအခန်းဖော်ဖြစ်မလဲလို့လေ။
ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ချိန် ကျောင်းဝန်းထဲက ကျွန်တော်ရထားတယ်ဆိုတဲ့ အိပ်ခန်းရှိရာကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ်လျှောက်လှမ်းလာတော့ 'မင်း က ဇော်ဇော်လားကွ?' လို့မေးသံကို ကြားလိုက်ရတယ်။ 'ဟုတ်ဘူးဗျ ကျွန်တော်က ကိုကိုလွင်' လို့ပြန်ဖြေလိုက်ပြီး အခန်းထဲရှိ ဘီရိုမှာ ပစ္စည်းပစ္စယတွေကို ထည့်သိုဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်။ သူပါလာတဲ့ အထုပ်အပိုးတွေကို အောက်ချပြီး ကျွန်တော့်ဆီလှမ်းလာကာ သူ့ကိုယ် သူမိတ်ဆက်ပါရဲ့ 'သူရ'တဲ့။
'ဇော်ဇော် ဘယ်အချိန်ရောက်မလဲ သိချင်သား'
'ကျွန်တော်နှင့် ဇော်ဇော်က ဇာတိတူတယ်ဗျ။ အထက်တန်းကျောင်းတက်တုန်းကလည်း ကျောင်းတစ်ကျောင်းတည်းလေ။ ကျောင်းမှာ အဆောင်ရတဲ့အကြောင်း ဘာမှ စကားမဟဘူး။နွေရာသီတစ်ခုလုံး သူ့ဆီက တိုလေးတစ်စောင်ပဲရတယ်'
မကြာခင်မှာပဲ အခန်းတံခါးကို ဖွင့်ပြီးဝင်လာတဲ့ ဇော်ဇော့်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ 'ဘော်ဒါတွေ ဘာလုပ်နေကြတာလဲကွ?' ဇော်ဇော်က ရောက်ရောက်ခြင်း နှုတ်ဆက်စကားဆိုတာ။ 'ဘာဖြစ်လို့လဲ? ငါတို့ အထုပ်အပိုးတွေဖြည်နေတာ။ မင်းက ငါတို့ဘာလုပ်နေတယ် ထင် လို့လဲကွ' သူရက ပြန်ပြီး မေးလိုက်တာပေါ့နော်။
ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ပစ္စည်းကို နေရာတကျထားပြီးနောက် စားသောက်ခန်းဆီသွား ညလယ်စာအတွက် သုံးဆောင်ကြပါတယ်။ တစ် ယောက်အိပ်ခုတင်ရယ်၊ နှစ်ထပ်အိပ်စင်ရယ်ရှိတော့ ညအိပ်မယ့်ကိစ္စအတွက် ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရတာပေါ့။ ဇော်ဇော်က တစ် ယောက်အိပ်ခုတင်မှာအိပ်ပြီး နှစ်ထပ်အိပ်စင်မှာတော့ အပေါ်က သူရ အိပ်ကာ အောက်က ကျွန်တော်နေရာယူမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက် ကြပါတယ်။ သုံးဦးသား ခရီးပန်းလာကြတာဆိုတော့ စောစောအိပ်မယ်ဆိုကာ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးတွေကလွဲလို့ အ၀တ်တွေချွတ် ကာ ကိုယ်စီအိပ်ယာဝင်ကြပါရော။
များသောအားဖြင့် တခြားငနဲတွေ အ၀တ်အကုန်ချွတ်ပြီး အတွင်းခံနှင့်နေတာကို သတိထားလိုက်တယ်ဆိုတာ တော်တော်နည်းပါတယ်။ သူရက နှစ်ထပ်အိပ်စင်ရဲ့အပေါ်အိပ်စင်ကို တက်လှမ်းစဉ်မှာ ဇော်ဇော့်ကို သေချာရှိုးတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ၀ိုးတ၀ါးတော့မြင်လိုက်ရ သား။ အိပ်စင်ပေါ်ကိုတက်ဖို့ ခြေထောက်ကို မလိုက်တော့ သူ့ပေါင်ကြားက အထုပ်အထည်မှာ နည်းနည်းရွေ့လျားသွားတယ် တကယ့် ကို ငြင်ငြင်သာသာလေး... အဟိ။
အတူနေကြတာ တစ်လကျော်သွားပြီးနောက် ကျွန်တော်တို့တွေ တစ်ယောက်ရဲ့ အချိန်ဇယားကို တစ်ယောက် used to ဖြစ်နေပါပြီ။ ဟီး ဟီး.... ကျွန်တော့်ရဲ့ -ွင်းထုအချိန်မှန်ဇယားအပါအ၀င်ပေါ့။ အနည်းငယ်သော ညတွေကျော်ဖြတ်ပြီးချိန်ကစပြီး သတိထားနေမိတာ ကျွန်တော့် အနေနဲ့တော့လေ။ ဇော်ဇော်က အမြဲတမ်းအိပ်ပျော်တာမြန်တယ်၊ နည်းနည်းလည်း ဟောက်တတ်သေးတာဗျ။ အခန်းတစ်ခု လုံး တိတ် ဆိတ်သွားချိန် အလင်းရောင် မသဲမကွဲဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ စိတ်ထဲမှာ အမျှော်အမျှင်ရှိရှိ စောင့်စားရတဲ့အချိန်ရောက်ပြီ ဆိုပြီး အောက်ခံ ဘောင်းဘီကို လျောချ တစ်ရှူးများများယူလိုက်ပြီး စောင်ပါးအောက်မှာ မသိမသာ လက်ကစားရတယ်။ အဲဒါက lube သုံးပြီး -ု တာ လောက် တော့ မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့ ဘာမှမရှိတာထက်တော့ ကောင်းပါတယ်။ သူရကလည်း ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နေတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ ဘာသာတစ်ကိုယ်ရေအာသာဖြေတာကို မသိမသာကျွန်တော်ကမြင်နိုင်ပါတယ်။ သူလုပ်နေတုန်း ကျွန်တော်လည်း လုပ်လိုက်တာဆို တော့ သူ့အတွက် မသိသာဘူးထင်ရဲ့။
ဇော်ဇော်က ကျောင်းသားအသစ်နောက်တစ်ယောက်နဲ့ အတူနေဖို့ ရွှေ့သွားတယ်။ semester အလယ်လောက်မှာဆိုတော့ ကျွန်တော် တို့အခန်းဖော်သစ် မရတော့ဘူးပေါ့။ ဒါကြောင့် သူရက ဇော်ဇော်အိပ်ခဲ့တဲ့ ခုတင်ဆီပြောင်းအိပ်တယ်။ မနက်ခင်းအိပ်ယာကထလို့ အ တွင်းခံဘောင်းဘီထဲက ထိုးထိုးထောင်ထောင်နှင့် ဇော်ဇော့်ကို အိပ်ယာထတိုင်း မမြင်ရတော့ လွမ်းသလို ရှိသားပါ။
တစ်ညတော့ မှောင်နေတဲ့အခန်းထဲ ဘာရယ်မဟုတ် ဝေ့၀ိုက်ကြည့်လိုက်မိတာ ပုံမှန် ပွတ်သပ်လှုပ်ရှားနေမှုတစ်ခုကို စောင်ပါးတစ်ထည်ဖုံး လျက် ၀ိုးတ၀ါးမြင်လိုက်ရပါတယ်။ လက်သီးဆုပ် ဆက်လက်ရွေ့လျားနေတာကိုမြင်ရသလို သူ့ငပဲကြီးကိုလည်းမြင်ရတယ်ဗျ။ အပေါ်က လွှမ်းခြုံထားတဲ့စောင်ပါးက သိပ်မထူတော့ သူရရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကို မြင်ရသလို လက်သီးနှင့်ဆုပ်ပြီး ကစားနေတဲ့ ငပဲကြီးပုံသဏ္ဌာန်ကို လည်း မှန်းလို့ရနေတာ။ သူ့နှုတ်ခမ်းက ခပ်တိုးတိုး ညည်းတွားသံကိုလည်း ကြားနေရသား။ ကျွန်တော့်အခန်းဖော်လေး သာယာနေတာ ကိုစောင့်ကြည့်ရင်း ကျွန်တော့်လက်ဟာလည်း စောင်အောက်ကို အသာလျှို ညီဘွားကို မာသထက်မာစေလိုက်ရင်းပေါ့။
ရုတ်တရက် သူရ တစ်ယောက် -ုနေတာကိုရပ်လိုက်တယ် ကျွန်တော်ကြည့်နေတာကို သိသွားခဲ့လို့လားမသိ။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်-ုနေတာ ကိုလည်း ရပ်လိုက်ကာ ငြိမ်ငြိမ်လေး လှဲနေလိုက်ပါတယ်။ သူရ စောင်ကိုလှန်လိုက်ရင်း ခြေထောက်တွေကို ကြမ်းပြင်ပေါ်ချလိုက်တယ်။ သူ့အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုဆွဲတင်ဝတ်ပြီး ကျွန်တော့်အိပ်ယာဆီ လှမ်းလာပါရောလား။
'ဟေး....ဘော်ဒါ' ခပ်တိုးတိုး သူရကခေါ်တာလေ။ 'ငါတို့နှစ်ယောက် လက်ကစားနေကြတာ အတူတူဖြစ်နေပုံပဲ...အာ... ငါတော့ မင်းဒီဟာကိုနည်းနည်းသုံးဖို့လိုအပ်မယ်ထင်တယ်' သူ့ရဲ့ Lube ပုလင်းကို ကျွန်တော်သုံးဖို့ ကမ်းပေးနေတာ။
'နည်းနည်းတော့ သုံးဖြစ်မှာ သေချာတာပေါ့ကွာ'
ရယ်ကျဲကျဲနှင့် ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်ရပါရဲ့။ နည်းနည်းလုပ်မနေပါနဲ့ကွာ များများသုံး ကျွန်တော် Lube ပုလင်းကို ဆွဲယူလိုက်ပြီး ကျေးဇူးစကားဆိုလိုက်တယ်။ ဒူးခေါက်ကွေးဆီရောက်နေတဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ဆွဲတင်ဝတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်အိပ်ယာပေါ်ထ ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ 'မင်းသိလား? ငါတို့နှစ်ယောက် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒါလုပ်ဖို့လိုနေတာ' ကျွန်တော့်အိပ်ယာ အစွန်းမှာ သူလာထိုင်ရင်း တိုးတိုးပြောသေး။
'မင်းရဲ့ပေါင်ကြားက ညီဘွားက တော်တော်ဒေါသကြီးတယ်နဲ့တူတယ် ဘော်ဒါ'
'ဟုတ်တယ် သူက ဒေါသကြီးလွန်းတယ်'
'ဒီဘက်ကိုတိုးပါကွ ငါ မင်းကိုကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူး' ကျွန်တော်သူ့ဘက်တိုးသွားရင်း လက်တစ်ဖက်ကို သူရပေါင်ခြံမှာထားလိုက် တယ်။ နောက်ပြီး အခန်းဖော်ရဲ့ မျက်နှာအခြေအနေကို မျက်လွှာပင့်ပြီးကြည့်ရတာပေါ့။
'လုံးဝစိတ်မဆိုးပါ ဆက်သာလုပ် ဘော်ဒါ'
ကျွန်တော့်လက်တွေဟာ စတင်ရွေ့လျားပါပြီ။ သူရပေါင်ခြံကို အထက်အောက် ဖောင်းကားနေတဲ့ အထုပ်အထည်ပေါ်ဖြတ်သန်းကာ ငပဲ ထွားထွားကိုအပါဝင်ပေါ့။ ခပ်ပါးပါးချည်သားအတွင်းခံရဲ့အောက်က ငပဲကိုထိတွေ့ခံစားနေရတော့ နှုတ်ခမ်းများပင်ရောရောင်ကိုက်မိပါရဲ့။ မာတင်း နေတဲ့ သူရရဲ့ငပဲခေါင်းကို ကျွန်တော့်လက်ချောင်းတွေရဲ့အောက်မှာ ကစားဖြစ်သားလေ။ သူ့ရွှေဥတွေကိုတော့ ပွတ်သပ်ကာ ဖျစ်ညှစ်ပေး မိဖြစ်ပါတယ်။ ချည်သားဘောင်းဘီပေါ်က ခပ်ရွရွပွတ်သပ်ပေးရုံမက ငြင်သာစွာဖျစ်ညှစ်ပေးတော့ သူရ ကြိုက်ဟန်တူပါ့။
'Oh Wow ကိုလွင်.....Yeah!' သူရ သူ့ရဲ့ ဖီလင်အရှိန်မြင့်လာတာကို အိပ်ယာပေါ်လှဲချရင်း ပါးစပ်ကိုဟကာ ဖြေလျော့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြုံးမိရကာ သူ့ရဲ့ငပဲခေါင်းကို လက်ချောင်းလေးတွေဖြင့် စပြီးပွတ်သပ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်။ သူရက ဦးခေါင်းကိုအပေါ်မော့ ပြီးထားတော့ သူ့မျက်နှာမှာ ဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မမြင်ရဘူး။ ကျွန်တော်သူ့အနားကိုပိုမိုတိုးကပ်လိုက်တော့ သူ့လက် တွေဟာ နုညံ့လွန်းစွာ ကျွန်တော့်ပေါင်ခွဆုံဆီရောက်လာကာ စမ်းသပ်ပါရော။
ကျွန်တော် ပီတိဖြစ်စွာ ကျယ်လောင်တဲ့ မိန်းမောသံတစ်ခု ကျွန်တော့်ပါးစပ်က ထွက်သွားပါတယ်။ သူရက တခစ်ခစ်ရယ်ရင်း 'သိပ်မကျယ် နဲ့လေကွာ ကိုလွင်ကလည်း၊ ငါတို့နှစ်ယောက်က အတော်ကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ အဆောင်တစ်ခုလုံး မသိစေ ချင်ပါဘူး'
'တော်တော့်ကို တော်တော်ကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်း' ကျွန်တော်သက်ပြင်းမောချကာ သူရရဲ့မာတောင်နေတဲ့ ငပဲကို နောက်တစ်ချက် ဖျစ် ညှစ်လိုက်ရင်းပေါ့။ နောက်နှစ်မိနစ်လောက် အကြာမှာတော့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် အိပ်ယာပေါ် အတူထိုင်ရင်း တစ်ယောက်ရဲ့ ငပဲ ကိုတခြားတစ်ယောက်က အပြန်အလှန်ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်ရင်း ပျော်နေကြတာကိုမြင်ရမှာပါ။ကျွန်တော် နောက်ကိုနည်းနည်းဆုတ်လိုက် ကာ ထိုင်ရင်းအခြားလက်တစ်ဖက်ဖြင့် သူရရဲ့ရွှေဥတွေကို အတွင်းခံဘောင်းဘီမျှော့ကြိုးကြားကနေ ပွတ်သပ်ကလိလိုက်တယ်။
'Mmmm....ငါကြိုက်တယ်ကွာ ကိုလွင်ရာ' သူရက သူ့တင်ပါးတွေကိုမြှောက်ကစားကာ ကျွန်တော့်လက်ဖ၀ါးတွေနှင့် ရွှေဥတွေကို ပွတ်သပ်စေကာ ထောက်ခံသမှုပြုတယ်လေ။
'ငါလည်း အတူတူပဲ သူရ' ကျွန်တော် အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှုရင်း 'အဲဒါကိုခံစားရတဲ့ ဖီလင်က အရမ်းအရမ်းကို good'
'Yeah!' သူရတစ်ယောက်တော အလုပ်များနေပါပြီ ဘောင်းဘီထဲမှာ အသားကုန်ထကြွနေတဲ့ ငပဲကို ပွတ်သပ်ရင်း ဘောင်းဘီရှေ့အကာ မှာ အစိုကွက်လေးထွက်ပေါ်လာတာကို စောင့်ကြည့်ရင်းပေါ့။ 'အခု အခန်းထဲ ဇော်ဇော် မနေတော့တာ ကောင်းတယ်၊ တော်ကြာ သူ လန့် ဖြန့်သွားမှာ'
'မသိဘူးလေ၊ ငါတို့နဲ့အတူတူ လာ join ချင်တယ် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာ' သူရ သူ့စကားသူ သဘောကျပြီး ရယ်တယ်။
'ပထမဦးဆုံး ငါတို့စတွေ့တဲ့နေ့ကတည်းက မင်းနဲ့အတူတူ လုပ်ဖို့ စောင့်စားနေမိတာ သိလား' သူရက အဲဒီလိုပြောတော့မှ အံ့သြမိ သလိုပဲ။
'ငါလည်း အဲဒီလိုပဲ' ကျွန်တော်သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ 'ဒါပေမဲ့ မင်းတစ်ယောက်ရသွားပြီးကတည်းကစပြီး မင်းစိတ်မ၀င်စားတော့ဘူး ထင်တာနဲ့ ငါလည်း အဲဒီကိစ္စကို မစဉ်းစားမိဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာ'
'ကောင်မလေးက မိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့....အရင်အပတ်ကပဲ လမ်းခွဲလိုက်ပြီလေ။ ငါက -ွင်းထုရတာကို ပိုကြိုက်တယ်။ ပြီးတော့ တခြားငနဲ တစ်ပွေနဲ့အတူ -ုချင်နေခဲ့သေးတာ အမြဲတမ်း။ အခုထိတော့ ငါနှင့်အတူ လက်ကစားမယ့်သူ မတွေ့သေးဘူးဆိုပါတော့'
'ငါလည်း မရှိသေးဘူး၊ မင်းလိုပဲ ငါလည်းအမြဲတမ်း အဲဒီလိုလုပ်ချင်နေခဲ့တာ'
'ဟေး....ဘာလို့ရပ်လိုက်တာလဲ?' သူရ ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကို လက်ကလေးတွေဖြင့် ပွတ်သပ်ရင်း မျက်စိကို အထက်လှန်ကြည့်ကာ မေးတယ်။
'ဆောရီး....ငါအတွေးတစ်ခုဝင်သွားလို့' ကျွန်တော့်အတွေးကို ဖယ်ပြီး ဘောင်းဘီမျှော့ကြိုးကြားလျှိုထားတဲ့လက်တွေကို ခပ်သွက်သွက် အလုပ်ရှုပ်စေလိုက်တယ်။ ပေါင်ကြားက အထုပ်အထည်ကြီးကြီး ကျွန်တော့်အခန်းဖော်လေးရဲ့ ပစ္စည်းကို မလွတ်မလပ် ဘောင်းဘီမျှော့ ကြိုးကြားထဲက ထပ်နှိုက်ပြီးကစားပေးရတာပေါ့။ သူရ သူ့လက်အစုံကို ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီထဲလျှိုထားရာကနေ ရုတ်သိမ်းလိုက်ကာ သူ့အတွင်းခံဘောင်းဘီကို လျှောချပစ်လိုက်တယ်။ သူရရဲ့ ငပဲဟာ ဘောင်းဘီမျှော့ကြိုးတဖြည်းဖြည်း အောက်ရွေ့သွားတာနဲ့ လှပစွာ ပေါ်လာပြီး လေထုထဲ တန်းတန်းမတ်မတ် ညွှန်ကာ ရင်ခုန်သံတွေမြန်အောင် စည်းချက်ညီညီ ဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲ တုန်နေသေးတော့။ သူ့ဘောင်းဘီကို ချွတ်ပြီးနောက် သူသဘောကျတယ်ဆိုတဲ့ အနက်ရောင် ကျွန်တော့်အတွင်းခံကို သူ့လက်အစုံဖြင့် ဖွဖွကိုင်ကာ ဆွဲချွတ် ပေးပါတယ်။
တစ်ကိုယ်လုံးအ၀တ်မပါတဲ့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် - တစ်ယောက်-ီးတစ်ယောက်ကိုင်ကာ လက်ကစားပွဲစတင်သည်ပေါ့။ သူရက အိပ်ယာပေါ်ကို လှဲလိုက်ပါဆိုတော့ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကို တင်းထားမနေဘဲ အားလုံးဖြေလျော့ထားလိုက်တယ်။ သူရက ကျွန်တော့် မျက်နှာပေါ် အုပ်မိုးပြီး မွတ်သိပ်စွာနမ်းပါရော။ သူ့အနမ်းကြောင့် ရင်ထဲရှိန်းကနဲဖြစ်သွားရသလို ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့ငပဲခေါင်းနဲ့ထိခတ် မှုကြောင့်ပါ ရင်တွေ ပိုမိုခုန်ရပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံး အထိအတွေ့ကြောင့် မိန်းမောရသလို ချောဆီရွှဲနေတဲ့သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့ပစ္စည်းရဲ့ဖိ ကပ်မှုကလည်း စိတ်ထဲတစ်မျိုးခံစားရစေသား။ ကျွန်တော့်လက်မောင်းတွေဖြင့် သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဆွဲဖက်လိုက်ကာ ရင်အုပ်တွေ ဗိုက်သား တွေ ကျွန်တော့်ရင်ခွင်နှင့် ထပ်လျက်။ God! သူ့ခန္ဓာကိုယ်က ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နှင့် ဖက်ထားလို့ကောင်းလိုက်တာ။ ကျွန်တော်တို့ငပဲ တွေဟာ pre-cum တွေကြောင့်ရော ချောဆီတွေကြောင့် ပစ္စည်းခြင်းပွတ်တိုက်နေရတာ အရသာပိုရှိ။ အား....သူ့တင်ပါးတွေကို လက် နှင့်ဆွဲပြီး ပိုကပ်စေသေးတယ်။
သူရ အသက်ရှူတာတွေ စတင်ပြင်းထန်လာပြီ 'ငါ ကြာအောင် သိပ်မထိမ်းနိုင်တော့ဘူး ဘော်ဒါ'
'မကြာလည်းရပါတယ်ကွာ' ကျွန်တော်တို့ ကျေနပ်မှုက အဓိကမဟုတ်လား။
'ငါ့ကိုယ်ပေါ်မှာ မင်းသုတ်ရည်တွေ ပန်းထုတ်တာကို ခံစားချင်တာ'
'မင်းတစ်ကိုယ်လုံးကိုလည်း ငါစိုရွှဲသွားအောင်လုပ်မှာနော် မင်းလုပ်သလိုပဲ'
ကျွန်တော် သူရ တင်ပါးတွေကို ထိန်းကိုင်ထားရင်း ကျွန်တော့်တင်တွေကိုလည်း ဇကောဝိုင်းမွှေ့ကာ မာတောင်နေတဲ့ငပဲတွေကို ပိုမိုပွတ် တိုက်စေလိုက်တယ်။
ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေပြီး သူရ တင်ပါးတွေကိုတစ်ချက် နှစ်ချက်လောက် ခပ်ဆတ်ဆတ်ရိုက်လိုက်ချိန်မှာတော့ သူ့ ထိန်းချုပ်မှုဟာ ပြေလျော့သွားပါပြီ။ ကျွန်တော့်အခန်းဖော်လေးရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးဟာ ကျွန်တော့်ထွေးဖက်မှုကြား လွန်းထိုးနေရင်း ပူနွေး တဲ့သုတ်ရည်ပျစ်တွေဟာ နှစ်ဦးသားဗိုက်သားတွေကို ရွှဲစိုသွားပါတော့တယ်။ 'ငါလည်းပြီး....ပြီးတော့မယ်သူရ' ကျွန်တော်သည်လည်း ခါးကိုသူ့ဆီးစပ်နှင့်ဖိကပ်လိုက်ရင်း သူ့နှုတ်ခမ်းအစုံကို မွတ်သိပ်စွာ စိုစွတ်အနမ်းပေးကာ သုတ်ရည်ပူတွေကို ပန်းထုတ်ပစ်မိပါ၏။
နှစ်ဦးသား မောပန်းနွမ်းလျမှုနှင့်အတူ ရေချိုးခန်းထဲ ခပ်သွက်သွက်ဝင် ရေချိုးကြကာ အိပ်ယာတစ်ခုထဲ အတူလှဲလျောင်းလိုက်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မျက်နှာခြင်းဆိုင် အတန်ကြာကြည့်မိကြရင်း နှုတ်ခမ်းခြင်း ဂဟေဆက်ကာ အနမ်းဖလှယ်ကြတော့တာပေါ့ အခါခါ။ တစ် ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စိတ်ဝိညာဉ်ခြင်းတူသူကိုတွေ့ရှိကြပြီးဖြစ်သလို နောက်အနာဂတ်မှာ ပိုမိုတဲ့အတွေအကြုံများစွာကို ဝေမျှပြီးသွား ကြမှာ အမှန်ပါပဲ။
'သိပ်မဖက်နဲ့ သူရရာ တစ်ယောက်ယောက်က ဖက်ထားရင် ငါအိပ်မပျော်တော့ဘူး'
'ငါက တစ်ခုခုကို ဖက်ထားမှ အိပ်ပျော်တာကွ ကိုလွင်ရ'
Alex Aung (9 March 2011)
Posted by Alex Aung at 5:49 PM No comments:
I Never Lose A Bet
အောင်မြင်လိုသော အမျိုးသားများအတွက် အရေးအကြီးဆုံး က...